ကော်ဖီမစ် နှင့် ချွေးမ – Grab Love Story
ကော်ဖီမစ် နှင့် ချွေးမ
by phyu May 31, 2021
သားဖြစ်သူ တိုးမောင်က နေပြည်တော်ကို သင်တန်း ၂ ပါတ်သွားရမှာမို့ အိမ်မှာမိန်းမသား၂
ယောက်ထဲရှိလို့ အိမ်လာစောင့်ပေးပါဦးအဖေဆိုလို့ မုဆိုးဖိုကြီး ဦးမြမောင်တစ်ယောက်ရန်ကုန်
ကို ဘုရားဖူးလိုသဘောထားပီးရောက်လာခဲ့တယ်။အသက်၆၀ ကျော်ဆိုပေမယ့် သန်တုန်းမြန်
သားတို့အိမ်ထောင်ကျတာ၅ နှစ်ကျော်ပီ ကလေးမရကြပေ။ ချွေးမ အေးအေးခိုင်က အထည်
မရှိခဲ့သော ချွေးမလေးက ဦးမြမောင်အား ဖခင်အရင်းလိုပင်အလွန်ချစ်ရှာသည်။ တိုးမောင်ခရီး
မထွက်မှီ၂ရက်ခန့်ကြို၍ ရန်ကုန်သို့ ဦးမြမောင်အရောက်သွားသည်။ငယ်သူငယ်ချင်းတွေနှင့်ဆုံ
ခန်းလေးက ဦးမြမောင်ရဲ့တောကအိမ်ထက်စာရင်တော့ ကျဉ်းတာပေါ့။အိပ်ခန်းက၂ ခန်းပဲပါ
သည်။ထပ်ခိုးလေးကိုကြံဖန်၍လုပ်ထားသည်မှာ ချစ်စရာ၊နေချင်စရာလေးပေါ့။ ဦးမြမောင်ကို
အပေါ်ထပ်ခိုးမှာပဲ ချွေးမဖြစ်သူ အေးအေးက နေရာချထားပေးသည်။အဲကွန်းတပ်ထားတော့
ဇိမ်ပေါ့ဗျာ။ရောက်စ ပထမညကတော့ ခရီးကလည်းပန်း၊ရန်ကုန်မြို့ထဲရှိသူငယ်ချင်းထံ သို့
ရောက်ရှိကြောင်းသတင်းပို့ရာ ဘီယာတိုက်လွှတ်လိုက်၍ အိမ်ရောက်သည်နှင့် တုန်းကနဲအိပ်။
( နက်ဖြန်ဘယ်အချိန်သွားမှာလည်း သား)
( မနက် ၅ နာရီကားနဲ့ပါ။ အဖေ ကားမောင်းပီးလိုက်ပို့နော် )
( အယ်..မောင်ကလည်း..အဖေနားပါစေ တက်စီ နဲ့သွားပေါ့ )ချွေးမက ၀င်ဟန့်သည်။
( ရပါတယ် သမီးရဲ့ အဖေလည်း ရန်ကုန်ကားမမောင်းရတာကြာပီလေ သမီးဈေးသွားတော့လဲ
မနက်အိပ်ယာထအောက်ထပ်ဆင်းလာတော့ထပ်ခိုးလှေခါးသေးသေးလေးကြားကမီးဖိုချောင်ထဲကိုမြင်နေရတော့အမှုမဲ့ကြည့်လိုက်မိသည်။ ဦးမြမောင်သားဖြစ်သူကိုအတော်ဖြုံသွားသည်။ဘေစင်တွင်ပန်းကန်ဆေးနေသောမိန်းမမိအေးကိုနောက်မှဖက်ရင်းဖင်တုံကြီးကိုညှောင့်နေသည်။ ရှေ့ကမိအေးကပြုံးပြုံးကြီး။တိုးမောင်တစ်ဆင့်တက်ပီးမိအေးထမီကိုပင့်ကာလက်ဖြင့်နှိုက်နေသည်။ ဦးမြမောင်တစ်ယောက်ကြည့်ရင်းနှင့်ရင်တွေပါခုန်လာသည်။ မိအေးကသဘောမတူဟန်ပြသည်ကိုပင်တိုးမောင်ကပိုကဲပြလိုက်သည်။ ထမီကိုအပေါ်ထိလှန်တင်ကာမိအေးဆောက်ဖုတ်ကိုနောက်မှနှိုက်နေသည်။ ဦးမြမောင်စိတ်ထဲမှာတော့အဖေတူသားပဲလိုချင်ရင်ဇွတ်၊ရှေ့နောက်သိတ်ပီးမကြည့်တတ်လေ။ဦးမြမောင်လှေခါးပေါ်ခဏထိုင်လိုက်ရင်း သားတို့လင်မယားကိုဆက်ကြည့်နေလိုက်သည်။အခုမှမနက်၆နာရီကျော်ပဲရှိသေးသည်။ ထမီလှန်တင်တုန်းကတိုးမောင်အားလက်ပြန်ရိုက်ချလိုက်သောမိအေးခမြာခုကြတော့လည်း ဖင်ကြီးအဖွေးသားနှင့်နံရံကိုလက်ဖြင့် ထောက်ကာပေါင်ကားလိုက်ရင်းဖင်ကိုကောက်ပေးလိုက်သည် မှာကြည့်နေသောဦးမြမောင်အတွက်ရင်ထဲဗုံးပေါက်သွားသည်။ စိတ်ထဲမတော့သားတို့ကိုအားကျနေသည်။
မိန်းမဆုံးတာ၁၅နှစ်ကျော်ပီဖြစ်သောဦးမြမောင်အတွက်တော့ငယ်မူငယ်သွေးတွေတက်ကြွလာပေပြီ။ ဟောသားဖြစ်သူရဲ့အံ့မခန်းလုပ်ကွက်ကတော့ဖအေ့ထက်သားတစ်လမကကြီးချေပြီ တည်း။ကြည့်..မိန်းမကိုနောက်ကနေဆောက်ဖုတ်ကရိုင်းနေတာကိုအားမရဟန်တူသည်။ ငုတ်တုတ်ထိုင်ပီးဆောက်ဖုတ်နှိုက်နေရာကထိုင်ချလိုက်ပီးမိအေးပေါင်ကြားထဲသို့မျက်နှာလှန်၍၀င်လိုက်လေပြီ။ မိအေးကမငြင်းသည့်အပြင်တိုးမောင်ခေါင်းဝင်နိုင်အောင်ပေါင်ကိုကွပေး လိုက်ပီးပါးစပ်နှင့်အဖုတ်ဝတည့်အောင်ပင်ချိန်ပေးလိုက်သေးသည်။ အာဂမိန်းမပေတည်း။ တိုးမောင်ပညာတွေတော်တော်တတ်နေပုံရသည်။မိအေးခမြာ ပေါင်ကိုဖြဲလိုက် ကွတတ လုပ်လိုက်နှင့်ပါးစပ်ကလဲဘာတွေရေရွတ်နေသည်ကိုမကြားရ။မီးဖိုခန်းတံခါးကမှန်တံခါးလေ။
ခဏနေတော့မိအေးကော့ပြန်လန်လာသည်။ကားထားသည့်ပေါင်ကိုပင်အားမရနိုင်ဖြစ်လာပုံရသည်။ ခြေတစ်ဖက်ကိုနံရံတွင်ထောက်လိုက်ရင်းအောက်ကတိုးမောင်မျက်နှာကိုသူ့အဖုတ်နှင့် ပွတ်နေသည်။၃မိနစ်ခန့်ကြာတော့မိအေးကော့ပြန်..ခေါင်းတွေမော့ပီးရေနစ်နေသလိုဖြစ်ပီးငြိမ်ကျသွားသည်။ မိအေးပေါင်ကြားကထွက်လာသောစပ်ဖြဲဖြဲတိုးမောင်မျက်နှာမှာအရေတွေပြောင်လက်လို့။ မိအေးရဲ့ဖြူဖွေးတောင့်တင်းနေတဲ့တင်ပါးကိုဖြန်းကနဲရိုက်လိုက်ပီးထမီကိုပြန်ဆွဲချပေးလိုက်သည်။
ဦးမြမောင်သေးပေါက်လိုက်တော့ လီးထိပ်မှအရည်ကြည်မျှင်များ တန်း၍ကျနေလေသည်။
ညပိုင်းပစ္စည်းတွေထုပ်ပိုးပီးတော့ ၉ နာရီထိုးနေပီ။
(ကဲငါတော့အိပ်ပီဟေသားတို့လည်းအိပ်ကြတော့မနက်ကိုအဖေသုံးနာရီခွဲလောက်နှိုးမယ်)။ အိပ်ယာထဲရောက်တော့ဦးမြမောင်မှာ မနက်ကမြင်ခဲ့ရသော ချွေးမဖြစ်သူ၏ဖင်ဖွေးဖွေးကြီးနှင့် သေခြာမမြင်လိုက်ရသောအဖုတ်တို့ကိုပြန်မြင်ယောင်ပီးလီးကတောင်လာပီ။မတ်တပ်ရပ်လျက် အမှုတ်ခံတာကိုပင်ယက်ယက်ရောရောအပေးကောင်းသောမိအေး။ ကုတင်ပေါ်ဆိုရင်တော့မြင်မကောင်းဟုတွေးနေရင်းဦးမြမောင်ကုတင်ပေါ်တွင်ပုဆိုးလေးလှန်ကာဂွင်းတိုက်နေသည်။ သားဖြစ်သူက ဖအေထက် လက်ဇောင်းထက်နေသည်ကိုတွေ့ရတော့ ကျေနပ်မိတာအမှန်။ ဦးမြမောင်မှာဂွင်းထုနေရင်းဟိုတွေးဒီတွေးဖြင့်အဲကွန်းအရသာခံစားရင်းမှေးကနဲအိပ်ပျော်သွား လေသည်။
မီးခဏပျက်သွားသည်။ပြန်လာတော့လည်း အဲကွန်းကချက်ချင်းအလုပ်မလုပ်တော့ ပူလာ၍
လိုကြားလိုက်၍နားစွင့်ကြည့်တော့ ဟုတ်သည်။ သားတို့လင်မယားအခန်းက။ အင်း ခရီးသွား
တော့မယ်ဆိုတော့ သားတော်မောင် အ၀ကြုံးနေဟန်တူ၏။ ဦးမြမောင်စိတ်ထဲ ချောင်းကြည့်လို
စိတ်ပေါ်လာသည်။အဓိကမှာချွေးမလေးဘယ်လိုများယောက်ကျားဖြစ်သူကိုပေးကျွေးနေသည်ကိုမြင်လိုခြင်းပင်။သူတို့အခန်းကအောက်ထပ်မှာ၊ဆင်းလိုက်လျင်လှေခါးမည်သံကြားရမည်။ စဉ်းစားရင်း အခန်းပြင်ထွက်ကာ အသံကိုနားစွင့်လိုက်တော့ သဲကွဲစွာကြားနေရသည်။
( အာ့..အောင်မလေး..မောင်ရဲ့ကောင်းလိုက်တာ…လုပ်..အား ဟုတ်တယ် အဲ့နေရာက ကောင်းတာ..အိုး..ဟင့်..အားလား..ရှီး.စ်စ်..လုပ်တတ်လိုက်တာ မောင်..ရာ..)
မိအေးအော်သံကဦးမြမောင်ရင်ကိုဗလောင်ဆူစေပီ။ဟုတ်ပီသူတို့အခန်းကဘုရားခန်းအောက်တည့်တည့်ဆိုတော့ အဲ့အခန်းထဲကနားထောင်လျင်ပိုကြားရမည်ပေါ့။အသံနားထောင်ရုံသာ ဘုရားခန်းထဲသို့ခြေဖွနင်းဝင်လိုက်သော ဦးမြမောင်မှာ ဘုရားခန်းကြမ်းပြင်ကြားတစ်နေရာမှ အောက်အခန်း၏ မီးရောင်ကိုမြင်လိုက်ရတော့ ပျော်သွားသည်။အို ဟိုး နိပ်ဟ၊ လက်တစ်လုံးနီးပါးဟနေသောကြမ်းပေါက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ သားတို့ ကုတင်ကို အတိုင်းသားရှင်းလင်းစွာမြင်နေရပီလေ။ကိုယ့်လှုပ်ရှားမှုကိုအသံမကြားအောင်ဦးမြမောင်ဟာ ပုဆိုးချွတ်ပီးကြမ်းပြင်ပေါ်ခင်းကာအသာအယာပင်ဖင်ပြောင်ကြီးဖြင့်မှောက်ဝါးထိုး၍ချောင်း ကြည့်လိုက်သည်။မှန်တင်ခုံရှေ့တွင်သားတို့လင်မယားမှာကိုယ်လုံးတီးကြီးတွေနဲ့ပေါ့။မတ်တပ်ရပ်လျက်ပင်တိုးမောင်မိအေးအဖုတ်ကိုယက်နေသည်။ ဖအေလိုပင်အဖုတ်ယက်ရတာသိတ်ကြိုက်သည့်သားပေတည်း။ ခဏနေတော့မိအေးက
တိုးမောင်က ကုတင်ပေါ်တွင်အိပ်လိုက်သည်။လီးကမိုးပေါ်ထောင်နေသည်။ဒီတစ်ခါတော့ ဖအေ့ထက်သားမကြီးနိုင်တော့။တိုးမောင်လီးကအရှည်ရောလုံးပါတ်ပါဦးမြမောင်ကိုမမှီဆိုပေ မယ့် သာမန်ယောက်ကျားတွေထက်တော့စံချိန်မှီသည်။လီးကုန်းစုတ်နေသည့်မိအေးဖင်ကြီးကို မှန်ထဲမှတစ်ဆင့်မြင်လိုက်ရတော့ဦးမြမောင်တံတွေးပါနင်ချင်သွားသည်။ဖင်ကြားကပြူးထွက် နေသောအက်ကွဲကြောင်းနီနီကြီးကအသဲယားစရာ။ဦးမြမောင်ကြည့်ရင်းဂွင်းထုနေသည်။
မိအေးတို့ ထန်ချက်ကတော့လီးစုတ်တာ အသံတွေတောင်မြည်အောင်စုတ်နေသည်။ပီးတော့ အပေါ်ကတက်ဆောင့်လေတော့သည်။သူတို့ လင်မယားမိုးအလင်းဆော်ကြလေသည်။ ဦးမြမောင်လည်းကြည့်ရင်းဂွင်းထုလိုက်ရာမကြုံစဖူး၂ချီပင်ပီးသွားလေသည်။ကောက်ချက်ချရ သော်မိအေးသည်ယောက်ကျားအပေါ်တွင်အလွန်တာဝန်ကျေသောမိန်းမဟုပြောနိုင်သလို ရာဂစိတ်ထန်သည့်မိန်းမ ဟုလည်းဆိုနိုင်ပေသည်။ တစ်ညလုံး တိုးမောင်စိတ်တိုင်းကျ အလိုးခံသည်။တိုးမောင်က၂ချီလောက်ပီးတာတွေ့ရပီးမိအေးပီးတာကတော့မရေတွက်နိုင် တော့ချေ။သားကို ကားဂိတ်ပို့ပီးအပြန်မိအေး ကိုဈေးပို့မည်ပြင်တော့
ဟုတ်တာပေါ့၊တစ်ညလုံး အလိုးခံထားရတာနားချင်မှာပေါ့။အိမ်ရောက်ပီး ခဏမှေးနေတုန်း မိအေးဟာ ဦးမြမောင်အခန်းထဲဝင်လာပီး
( လျှော်စရာတွေ လာယူတာအဖေ)။
(နေနေ သမီးအဲ့တာ မညစ်သေးဘူးရတယ်)
(အာ..ဟိုနေ့ကတည်းက ပုဆိုးပါ အဖေရယ်)
ဦးမြမောင်ပုဆိုးကိုကိုင်ထားတာကိုမိအေးကဇွတ်အတင်းဆွဲယူသည်။ဦးမြမောင်အတော်ရှက် သွားသည်။အဲ့ပုဆိုးကသူဂွင်းထုပီးလရေတွေပေနေသည့်ပုဆိုးလေ။မိအေးကပုဆိုးကိုဆွဲယူပီး ဖြန့်ကြည့်တော့ပုဆိုးတစ်ထည်လုံးသုတ်ရေတွေကအဖွေးသား၊တစ်ချို့နေရာဆိုလျင်အဖြူခဲတွေအပြစ်လိုက်။ မိအေးဦးမြမောင်ကိုကြည့်ပီး ပြုံးစနဲ့ဖြစ်သွားသည်။ မတတ်နိုင်တော့သူလည်း အိမ်ထောင်သည်ပဲနားလည်မှာပါဟုဖော့၍ဦးမြမောင်တွေးလိုက်သည်။ညစာချက်တော့မိအေးက ဦးမြမောင်အတွက်အားရှိမည့် ဟင်းများသာချက်ထားလေသည်။
( အိပ်ရာဝင် အဖေသောက်ဖို့ နွားနို့ရှိတယ်နော် အဖေ )
ဦးမြမောင်စိတ်ထဲမှာတော့သူကငါ့ကိုအဖေအရင်းလိုစိတ်ထားနေတာငါကသာဖောက်ပြန်နေ တာ ဟုတွေးပီးလိပ်ပြာမလုံ။
ကျုပ်ဆိုတဲ့ ဦးမြမောင်ကလည်းတော်တော်ဆိုးတာပါဗျာ။စိတ်မကူးအပ် မကြံစည်အပ်ရာ ချွေးမ
လေးကိုပဲစိတ်ကူးထဲရောက်နေတော့တာ။သားတော်မောင် ခရီးသွားလို့ ၃ ရက်လောက်ပဲရှိမယ်
မိအေးနဲ့ အတူနေ တူမလေး မိတာက အဝေးသင်စာမေးပွဲဖြေဖို့ အနီးကပ်တက်ရမယ်ဆိုပီး ပြန်
သွားတော့ အိမ်မှာ ကျုပ်နဲ့ မိအေးနှစ်ယောက်ထဲပေါ့။မနက်-ညနေ သူ့ကို ဈေးပို့ကြိုလုပ်တာက
လွဲရင်အချိန်တွေအားနေတာကြောင့် သူငယ်ချင်း ပင်စင်စားတွေအိမ်လျောက်လည်၊တစ်ခါတရံ
အသောက်အစားလေးနဲနဲပေါ့။သူငယ်ချင်းထဲက တစ်ယောက်က အစ.အနောက်လဲသန်တယ်
လိင်ကိစ္စလည်း ၀ါသနာကြီးတယ်။သူယူထားတာကလည်းညီအစ်မ ၂ယောက်ကို ယူထားတာ။
တစ်ရက် မိအေးကို ဈေးပို့နေတုန်း သူနဲ့တွေ့တော့ ဇတ်လမ်းကစ.ပါလေပီ။ဘယ်လိုမှပြောမရ။
(ဟမ်ခုအိမ်မှာခင်ဗျားတို့၂ယောက်ထဲဟုတ်လားပီးတော့သားကလည်းခရီးထွက်နေတာဆို တော့ ဦးမြမောင်ရေ ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးဆိုတာ၂ခါမရဘူးဗျ..ခင်ဗျားစမ်းကြည့်ပါလား..မရလဲ အရင်းပေါ့ဗျာ.အဟင်း ယောက္ခမ နဲ့ချွေးမ ဇတ်လမ်းတွေ ခင်ဗျားလည်းဖတ်ဖူးတာပဲ..ဟဲဟဲ) ကျုပ်စိတ်ထဲ မရိုးသားပေမယ့် ချွေးမလေးက ပကတိဖြူစင်နေတာကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ လူယုတ်မာလိုမြင်လာပါတော့တယ်။ခုဆိုတိုးမောင်သွားတာ၁၀ရက်ကျော်တဲ့တစ်နေ့မှာပဲမိအေးကစိတ်ပျက်စွာဖြင့်
( အဖေ့သားက နောက်တစ်ပါတ် လောက်ထပ်ကြာမယ်တဲ့ ရာထူးတိုးဖြေရမှာမို့တဲ့..အဲ့တာ အဖေ့ကို ဆက်နေပေးပါဦးတဲ့)ဟုဆိုလာလေသည်။
( ရပါတယ်သမီးရဲ့ အဖေက အဖေတို့ကျောင်းသားဟောင်းများတွေ့ဆုံပွဲ ပီးမှပြန်မှာပါ )
မှတ်မှတ်ရရ အဲ့ဒီနေ့ညက ကျုပ်စိတ်ထဲတစ်မျိုးထင်နေလို့ ချွေးမအခန်းကိုချောင်းကြည့်တာ ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။တိုးမောင်နဲ့ည၁နာရီလောက်ကြီးဖုန်းပြောသံကြားရပီးငြိမ်နေလို့ချောင်း လိုက်တာမိအေးဟာတိုးမောင်နဲ့ အင်တာနက်ကနေ Video call ခေါ်ပီးတစ်ယောက်
အဲ့ဒီအခါကျမှ ချွေးမလေးဘယ်လောက်ထန်ကြောင်း ကျုပ်သိခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ဆောက်ဖုတ်ကို
( ကြည့်ပါဦး မောင်ရယ်..အေး လေ မောင့်ကို လွမ်းနေတာ အရည်တွေကို ရွှဲနေတာပဲ) ဆောက်ဖုတ်ထဲကို လက်ထိုးထဲ့ပီး
(မောင့်လီး မြင်ရတာ အေးပိုပီးယားလာပီမောင်ရေ..အလိုးခံချင်တာ အရမ်းပဲမောင်ရယ် မြန်မြန်လာပါတော့..အေး အလိုးခံချင်လှပီ)တဲ့။
အပြန်အလှန်တဏှာစကားတွေပြောကြရင်း မိအေးတစ်ချီပီးသွားပါတော့တယ်။ ကိုယ်ချင်းစာ
တယ်လေ။ကျုပ်ဆို မိန်းမဆုံးကတည်းကလိင်ဆက်ဆံခဲ့တာဆိုလို့ အတော်နည်းပါတယ်။ရွာမှာ
လာလို့ မြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီးဆီမှာ ယောက်ကျားချင်းမို့တိုးတိုးတိတ်တိတ်သွားပြမိလိုက်ပါတယ်
ကျုပ်လီးကို ဆရာဝန်ကြီးကသေခြာကိုင်ကြည့်ပီး တောင်လာအောင်ဂွင်းထုပေးနေတော့ ဒီလူ
ဖို့ချိန်းတော့ အခြောက်ဆိုတာသေခြာပီ၊ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဖင်လိုးတဲ့အရသာကို စမ်းချင်
တာနဲ့ သူ့အိမ်သွားလိုက်တော့ ကျုပ်ထင်တာလွဲသွားတယ်ဗျာ။ဒီလိုဗျ၊ သူ့ဆီရောက်တော့ကိုယ်
တုံးလုံးချွတ်ခိုင်းပီးကုတင်မှာ အိပ်ခိုင်းတာပေါ့။ကျုပ်မျက်စိကို အ၀တ်နဲ့စည်းထားတာဗျ။ငြိမ်ငြိမ်
အရည်တွေလိမ်းမှန်းမသိဘူး ဆီမွှေးလို့ထင်တာပဲ။လိမ်းရင်းနဲ့ ဂွင်းထုသလိုပါလုပ်ပေးတော့ ကျုပ် အကြိုက်ပေါ့။ ဆရာဝန်ကြီးက ကျုပ်ကြည့်မှာကိုရှက်လို့ မျက်စိကိုအ၀တ်စည်းထားပေး
တယ်ထင်နေတာပေါ့။ဆရာကြီးက ကျုပ်လီးကိုဂွင်းထုပေးပီးတော့ ခဏငြိမ်သွားတယ်။ပီးတော့
ကျုပ်လီးဒစ်ကို နွေးပီးနူးညံ့တဲ့အရာတစ်ခုထိလာတာလည်းခံစားရရောကျုပ်သိပီလေ ဆရာကြီး
လို့တောင်ထင်သွားတယ်။ကျုပ်ကိုလည်းပြောတယ် ( မပီးနဲ့ဦးနော် အကြာကြီးထိမ်းနိုင်တယ် ဟုတ်လား)ကျုပ်ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်တော့ ဆရာကြီးက ကျုပ်အပေါ်ကိုကားယားခွပီးတက်လိုက်
ပါတယ်။လီးကိုလည်း ဆီတွေရွှဲနေအောင်သုတ်ပီး အပေါက်ဝတစ်ခုကိုတေ့ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဖြည်းဖြည်းချင်း ကျုပ်လီးကြီးက အခေါင်းတစ်ခုထဲကိုဗြစ်ဗြစ်နဲ့ထိုးခွဲပီးဝင်သွားပါတယ်။ ကျုပ် ဖင် ကိုမလိုးဘူးပေမယ့် အခုကျုပ်လီးဝင်နေတာ ဖင်ပေါက်မဟုတ်မှန်းသိတယ်။ဆောက်ပါတ်
တစ်ခုထဲ ကျုပ်လီးဝင်နေမှန်းသိတယ်။လီးအဆုံးဝင်လည်းပီးရော အပေါ်ကမြင်းစီးသလိုဆောင့်
အောက်ကနေပီး ပင့်အဆောင့်မှာအပေါ်ကဆောင့်အချနဲ့လည်းဆုံရော အပေါ်ကမိန်းမမခံစား
နိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ထင်ရဲ့ အသံထွက်လာတယ်။(အာ..ဟင့် ကောင်းလိုက်တာနော်)တဲ့။ကျုပ်
ဆောင့်နေတဲ့သူက ဆရာဝန်ကတော်ကြီးပါရောဗျာ။ဆရာကြီးက မျက်နှာပျက်နေပီ။
(ချစ် လေးကလည်းကွာ ဘာလို့ဖြုတ်လိုက်တာလဲ ရှက်စရာကြီး)။
ဆရာဝန်ကတော်ကြီးက မှုန်ယိုနေတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ ကျုပ်ကိုကြည့်ရင်း
( မရှက်နိုင်တော့ဘူး ဒါလင်ရေ ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ လီး ပိုင်ရှင်ကို ချစ်လေးကြည့်ပီး အလိုးခံချင်တာ..နော် ကိုမြမောင် မဟုတ်ဘူးလား ဟင့်)။
( ကျနော်တို့ကို နားလည်ပါကိုမြမောင်ရယ်မနေ့ကခင်ဗျားလီးအကြောင်းသူ့ကိုပြောမိလိုက်တာ အဟင်းအဲ့ဒီလီးနဲ့ခံချင်ပါတယ်ဆိုလို့ခုလိုစီစဉ်လိုက်ရတာပါဘယ်သူ့မှရှောက်မပြောပါနဲ့ဗျာ.. ကျနော်တို့လင်မယားကခုလိုတစ်စိမ်းတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံရမှစိတ်ကျေနပ်ကြတာမို့ပါ။ အဲ့လိုနဲ့ပဲကျုပ်ဟာဆရာဝန်ကတော်ကြီးကိုရော..ဆရာဝန်ကြီးဖင်ကိုပါလိုးခဲ့ရဘူးပါတယ်။အဲ့တာတွေက ကြာခဲ့ပါပီ။
ခုတော့ကျုပ်မှာ လူပျိုလေးလို အပြာဝထ္ထုတွေဖတ်လိုက် အပြာဗီဒီယိုတွေကြည့်လိုက်နဲ့ ၃ ရက်ခြားတစ်ခါလောက်ဂွင်းထုနေရတာအတော်ကြာခဲ့ပါပီ။လက်သမားဖြစ်နေတာအတော်ကြာပီပဲဆိုကြပါဆို့ရဲ့။အခုတော့ငယ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်သူတွယ်နေတဲ့ ကြိုက်ကုန်းဆော်ကြီးကိုကျုပ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတာ၂ယောက်လုံးမြင်မြင်ချင်းဖီလင်တွေတက်လာတာကြောင့်မနက်ဖြန်ညနေချိန်းပီးဆော်ကြမှာပါ။နာမယ်က မစိုး တဲ့၊ အသက်က ၄၅ကျော်ပီ မော်လမြိုင်သူ စစ်စစ်၊ သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ အသက် ၅၀ ကျော်ဘဲကြီးများကိုသာ စိတ်ဝင်စားတာ ၊သူငယ်ချင်းပြောတာကအဲ့ဒီဆော်ကြီးကနောက်ပေါက်ပါ ဖွင့်လို့ရတယ် တဲ့ ၊ သိတ်ကြိုက်တာဆိုတော့ကျုပ်လီးထိပ်မှာအရေကြည်တွေတောင်စိမ့်သွားတယ် တစ်ကယ်။ ဒီနေ့ဈေးပိတ်တာကြောင့်ချွေးမလေးဟာ အိမ်ရှင်းလင်း အ၀တ်လျော် လုပ်နေပါတယ်။ ကျုပ်လည်းနက်ဖြန်အတွက်အားရှိမယ့်အစာတွေစားရင်းတီဗီရှေ့မှာဇိမ်ယစ်ရင်းအိပ်ပျော်သွား ပါတယ်။အိမ်မက်တောင်မက်လိုက်သေး။ဟိုဆော်ကြီးကသူ့ဆောက်ဖုတ်ကိုနှိုက်ခိုင်းနေတာတဲ့။ မက်လို့ကောင်းလိုက်တာများ ချွေးမလေး လာနှိုးမှနိုးတာတောင် လီးကတောင်နေလိုက်တာ သူတောင်ရိပ်မိသွားတယ်။
( အဖေ..အဖေ့..အော်..အဖေကဒီမှာလာပီး ဇိမ်ကျနေတာကိုး၃ နာရီထိုးပီအဖေရဲ့ ကော်ဖီသောက်မလား အအေးဖျော်လိုက်ရမလား)
(အော်..အေးသမီး..အအေးပဲဖျော်ခဲ့ပါကွာ အဖေ ကော်ဖီမကြိုက်ပါဘူး)။
ခဏကြာတော့ အအေးခွက်ကိုင်ပီး ကျုပ်နားမှာထိုင်ချလိုက်ရင်း အေးဆေးစွာပဲပြောလိုက်တဲ့ ချွေးမလေးရဲ့စကားကြောင့်ကျုပ်ဟာကမ္ဘာပျက်မတတ်တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။
( ရော့အဖေသခွားမွှေးအေးအေးလေးသောက်လိုက်ဦး သမီးကတော့ အဖေ ကော်ဖီ မကြိုက် ဘူးဆိုလို့ အဖေ့စားပွဲပေါ်က ကော်ဖီမစ်အထုတ်လေး ဖျော်သောက်လိုက်ပီ အသဲပုံလေးနဲ့ အထုပ်လေးလေ မွှေးနေတာပဲ)။
အရပ်ကတို့ရေ ကယ်ကြပါဦးဗျာ။ ကျုပ်ချွေးမလေး သောက်လိုက်တဲ့ ကျုပ်စားပွဲပေါ်က ကော်ဖီမစ်ဆိုတာတစ်ခြားလားဗျာ။ ခင်ဗျားတို့သိကြတဲ့LOVE-COFFEEလေ။မိန်းမတွေ လိင်စိတ်လွန်ကဲ အောင်တိုက်တဲ့ဆေးတစ်မျိုးလေ။ တရားမ၀င် တဲ့ဆေးပါ ။ အနံ့ရောအရသာပါတစ်ကယ့်ကော်ဖီလိုပဲတဲ့။ကျုပ်သူငယ်ချင်းပေးလိုက်တာ ဟိုဆော်ကြီးကို
ဖြုတ်ရင် အဲ့ဒီဆေးတိုက်ပီးဆော်တဲ့၊ ကျုပ်လီးကိုမြင်ပီး လန့်သွားမှာစိုးလို့တဲ့။ဆေးတန်ခိုးက
သောက်ပီး နာရီဝက်တစ်နာရီလောက်ဆိုပြပီတဲ့။ကျုပ်ကမျက်ပြူးဆန်ပြာနဲ့ မိအေးကိုကြည့်ပီး
(ဘယ်အချိန်က သောက်လိုက်တာလည်းသမီးရယ် ဒုက္ခတော့ရောက်ကုန်တော့မှာပဲ ကွယ် )။
(နာရီဝက်လောက်ရှိပီအဖေ..ဘာလို့လဲဟင်အဲ့ဒီကော်ဖီကဘာမို့လဲပြောပါဦးအဖေရဲ့) ကျုပ်ကပိုပီးသေခြာသွားအောင် မိအေးလက်ကိုဆွဲပီး
(ဘယ်နားက ကော်ဖီထုပ်လဲသမီး လာ အဖေ့ကိုပြစမ်း)။
သေခြာပါပီ၊ဟို ကော်ဖီမစ်ပါပဲ။သူနဲ့တွဲပီး ယောက်ကျားတွေသောက်ဖို့ဆေးလုံးလေးက စားပွဲပေါ်မှာကျုပ်ကိုလှောင်နေသယောင်။ဆေးလုံးလေးကိုယူလိုက်ပီးမိအေးကိုသေခြာစူးစိုက်ပီးကြည့်နေတော့ မိအေး ကျုပ်မျက်လုံးတွေကို ကြည့်ရင်း သူ့ကိုယ်သူ နို့ဖုံးသလို ဖင်ကာသလို ယောင်ခြာခြာဖြစ်နေသည်။ဆေးတန်ခိုးတော့မပြသေး။မတတ်နိုင်တော့အမှန်အတိုင်းရှင်းပြပီး ဆေးပေးလိုက်တဲ့သူငယ်ချင်းကိုဖြေဆေးရှိမရှိမေးကြည့်ရတော့မည်ပေါ့။
(ကဲ..လာလာ သမီး အဖေရှင်းပြမယ် မကြောက်နဲ့နော် သမီး….ဘာလို့များ အဖေ့ကို မမေးပဲ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် သောက်ရတာလဲသမီးရယ် ဒုက္ခတွေတော့ရောက်ကုန်တော့မယ် ထင်ပါရဲ့ သမီးလေးရယ် ဟင်း)
(ဘာ..ဘာ့လို့လဲအဖေ..သမီးလည်း.ဟိုဟို..ကော်ဖီမစ်အမျိုးစားအသစ်အဖေယူလာတယ်ထင်လို့ သောက်ပီးမှပဲပြောတော့မယ် လို့တွေးပီးသောက်လိုက်တာပါ..ရှင်းပြပါဦး အဖေရယ် သမီးကြောက်လိုက်တာ)။
ကျုပ် တို့ဧည့်ခန်းမှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ကြရင်း ကျုပ်ကပဲစကားစလိုက်ပါတယ်။
(ဒီလိုသမီးရေ.ခုအဖေစကားမပြောခင်ကြိုပြောချင်တာကသမီးအဖေ့ကိုအထင်မလွဲပါနဲ့၊အထင်မသေးပါနဲ့လို့ အရင်ပြောပါရစေ..သမီးအခုသောက်လိုက်တဲ့ ကော်ဖီမစ်က ရိုးရိုးကော်ဖီမစ် မဟုတ်ဘူးသမီး၊ဟိုလေ..အဖေပြောရမှာရှက်လဲရှက်ပါတယ်သမီးရယ်..အဟမ်း..အဲ့ဒီကော်ဖီ မစ်ကမိန်းကလေးတွေအတွက်သီးသန့်ထုတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးလိင်စိတ်ထကြွဆေးပဲသမီး၊ အရသာကကော်ဖီမစ်လိုပဲတဲ့။သောက်ပီးရင်၄၅မိနစ်လောက်ဆိုဆေးအာနိသင်စပြတယ်တဲ့။ အဖေ့သူငယ်ချင်းကလက်ဆောင်ပေးလို့အဖေယူလာတာပါသမီးရယ်)။
ဆက်တိုက်ပြောပြနေတဲ့ကျုပ်ကိုကြည့်ပီးအစပထမတော့မိအေးဟာအံ့သြဟန်ပြပေမယ့်လည်း ကျုပ်စကားလည်းဆုံးရောခွက်ထိုးခွက်လန်ရီတော့တာပါပဲ။ ကျုပ်တောင်ကြောင်သွား တယ်။
( အဖေရယ်..နောက်စရာရှားလို့ ကိုယ့်သမီးကို ခုလိုနောက်စရာလား လန့်သွားတာပဲ)
ဒုက္ခေါ ခက်ခြေပြီကော ဒီကလေးမ ။
( အဖေ မနောက်ပါဘူးသမီးရယ် တစ်ကယ်ပါ ကွယ်)
(ဟား ဟား..ကဲတစ်ကယ်ဆိုလည်း သမီးသောက်ပီးတာတစ်နာရီနီးပါးရှိပီ ခုထိဘာမှမဖြစ်သေး
ပါ့လား..ဟင်းဟင်း အဖေ့ဆေးက အာပလာကြီးနေမှာပါ..အဖေဟာလေ နောက်စရာရှားလို့ )
ပြောပီးထိုင်ရာကအထ မိအေးလက်ကိုဆွဲပီး ကျုပ်ထပ်ပြောပါသေးတယ်။မရဘူးဗျာ။မီးဖိုချောင်
ထဲရယ်မောရင်းဝင်သွားလေရဲ့။ကျုပ်လဲ ချွေးမကို နဲနဲတော့တင်းသွားတယ်။ကဲကြည့်ကြသေး
တာပေါ့ ကော်ဖီမစ်ရယ်လို့ကြိမ်းဝါးလိုက်ပီး လက်ထဲပါလာတဲ့ ယောက်ကျားတွေအတွက် တွဲ
ဆေးလုံးကိုဖောက်ပီး အမှုန့်တွေကိုသောက်ချလိုက်ပါတယ်။ကိုင်း မှတ်ထား ငါကွ..။
စိတ်ကြောင့်ပဲလားမသိတစ်ကိုယ်လုံးရှိန်းကနဲနွေးသွားတယ်။ချွေးမလေး မိအေး ဘာဖြစ် နေလည်း သိချင် တာနဲ့ မီးဖိုချောင်ထဲကြည့်လိုက်ရာပုံမှန်ပဲ ညစာအတွက်ဟင်းတွေ နွေးဖို့လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။သူ့နားသွားလိုက်ပီး
( ဒို့အဖေကတော့ ရီရတယ် ဟေ့)တဲ့။
(အဖေ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ခုပြောတာသေခြာနားထောင်ပါသမီးလေးရယ်..အဖေပြောတာတွေ ဟာ အမှန်တွေပါ။ အဖေ့သူငယ်ချင်းက..ဟို…ကဲပါ အဖေ မရှက်တော့ပါဘူး၊ သူငယ်ချင်းက သူနဲ့တွဲနေတဲ့ကြိုက်ကုန်းဆော်ကြီးတစ်ဗွေကို..အဖေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ အဲ့ဒီဆော်ကြီးက လည်းအဖေနဲ့အိပ်ဖို့သဘောတူတယ်ဆိုလို့သူငယ်ချင်းကအဲ့ဒီဆော်ကြီးကိုခုသမီးသောက်လိုက်တဲ့ ကော်ဖီမစ်လိင်စိတ်ကြွဆေးကို တိုက်ပီး ဟိုခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ဆက်ဆံဖို့ပြောလို့ အဖေ ဒီဆေးကိုယူလာတာပါသမီးရယ်…အဖေ့သူငယ်ချင်းကအဖေ့ကိုနောက်လေ့နောက်ထ တော့ မရှိပါဘူး..သူလည်းအဲ့ဒီဆေးကိုစမ်းပီးပီအတော်ကောင်းတယ်လို့လည်းပြောတယ်သမီးရယ်..ဟင်း…)။
(.ဟို..တ..တ ကယ်လား အဖေ..ဟင်)
( ဒီမယ် သမီးမယုံရင် အဖေ့သူငယ်ချင်းဆီကို သမီးဖုန်းနဲ့ဆက်ပီးမေးပြမယ်၊အဖေ့ ဖုန်းနဲ့ဆို
ဇာတ်တိုက်ထားတယ်လို့ သမီးထင်လိမ့်မယ်၊သမီးဖုန်းပေး အဖေ စပီကာဖွင့်ပီးမေးပြမယ်)
မိအေးဟာ သူ့ဖုန်းကို ကတုန်ကရင်နဲ့ပေးရှာတယ်။
( အေး ၀င်းမြင့်လား ငါပါ မြမောင်ပါ ကွ)
(အာ မင်းကလည်း ဘယ်ကဖုန်းနဲ့ဆက်တာတုန်းကွ)
(ဒါ ငါ့သားဖုန်းပါကွာ ငါ့ဖုန်းဘေလ်ကုန်နေလို့)။
မိအေးတစ်ယောက် မျက်နှာဇီးရွက်လောက်လေးနှင့် နားထောင်နေရှာသည်။
(ဟိုကွာ မင်းပေးတဲ့ ကော်ဖီမစ်ဆေးအကြောင်း အသေးစိတ်သိချင်လို့ကွ ရှင်းပြပါဦး)
(အေးကွာမနေ့ကငါသေခြာမပြောလိုက်ရဘူးဒီလိုကွအဲ့ဒီဆေးကမိန်းကလေးပဲသောက်ရတာ အရသာကိုသာမန်ကော်ဖီမစ်လိုလုပ်ထားပေမယ့်သေခြာအရသာခံကြည့်ရင်သစ်ရွက်စိမ်းအနံ့ လေးရတယ်..မြန်မာပြည်မှာ လုံးဝမရှိတဲ့ဆေး..ကွ )
တစ်ဖက်က စကားမဆုံးခင် မိအေးမှာတိုင်ခုံပေါ်သို့အရုပ်ကြိုးပြတ်ထိုင်ချလိုက်လေတော့သည်။
( သောက်ပီး တစ်နာရီအတွင်းမှာ ဆေးတန်ခိုးပြတယ်.နေဦးမင်းဘာမေးမယ် ဆိုတာငါသိတယ် နားထောင်.ဘယ်လိုဆေးအာနိသင်ပြလည်းဆိုတော့မိန်းမတစ်ကိုယ်လုံးမိတ်ကိုက်သလိုဆစ်ကနဲခဏလေးပဲဖြစ်ပြီးပြန်ပျောက်သွားမယ် ပီးတော့ အတူရှိနေတဲ့ ယောက်ကျားလေးနဲ့ (သမီးရီးစားတွေသောက်ကြတာဆိုတော့ကိုယ့်ကောင်လေးနဲ့ပေါ့)လိင်ဆက်ဆံလိုစိတ်ဖြစ်လာမယ်။ထူးခြားတာက လိင်ဆက်ဆံတာ အရှက်အကြောက်ကင်းသွားတယ်ပေါ့ကွာ..၊မိန်းကလေး ကကိုယ်တိုင်စပီးဖွင့်ပြောလာတာမျိုးပေါ့..၊ဟဲ..ဟဲ..ငါ့မိန်းမကိုအရင်ဦးဆုံးစမ်းကြည့်တာ.. မှန်တယ်မောင်ရေ..သိလား.. တီဗီကြည့်နေတဲ့ ငါ့အနားလာပီး “..ကိုဝင်းမြင့်..အိပ်ကြစို့လေ..”တဲ့ ။ငါကလည်း “ အာ..မင့်ဟာမင်း အိပ်နှင့်လေကွာ မိန်းမကလည်း..ဒီမှာ စီးရီး-A ပွဲ ကောင်းနေလို့..”ဆိုတော့..ခဏလေး ငါ့ဘေးမှာ တီဗီထိုင်ကြည့်နေပီး ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ ငါ့ပေါင်ကြားကို လှမ်းနှိုက်ပီး
ဟိုကွာခဏနေတော့ ဖုတ်ဖုတ်ထဲကပါ ယားလာတော့တာပေါ့ကွာ။ဒီဆေးရဲ့ငါကြိုက်တဲ့အချက်
ကတော့ အရှက်ကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ မိန်းမကိုတောင် ကျမကိုလုပ်ပါတော့အကိုရယ်လို့ဖွင့်ပြောရ
သည်အထိစွမ်းတယ်။ငါက ဒီဆေးကို ကြိုက်ကုန်းတွေ နှာထန်တဲ့ဆော်ကြီးတွေကိုပဲတိုက်လေ့
ရှိတယ်။မင်းသုံးကြည့်လိုက်စမ်းပါကွ ဟို မစိုးကြီးက အဖိုးကြီးတွေပဲကုန်းတာ၊လူငယ်ဆို နိုး။
ပီးတော့ ဒီဆေးရဲ့နောက်အာနိသင်တစ်ခုက ယောက်ကျားရောမိန်းမပါ ဆေးစွမ်းပြလာရင်လေ
ကွာ..အေးမင်းငါပြောလိုက်မယ် မစိုးကြီးထန်ချက်ကတော့ လန်ထွက်နေတာကွ အဟီး မင်း
အကြိုက် ဘီဆိုက်ပါ ကိုင်လို့ရတယ်မောင်ရေ့ ကဲဘာသိချင်သေးလည်း။
(အေးပါ ကျေးဇူးပါကွာ ငါနောက်သိချင်တာက ဒီဆေးကို မိန်းကလေးကသောက်ပီးခါမှ အစဉ်မပြေလို့ယောက်ကျားနဲ့မဆက်ဆံဖြစ်ရင်ကောဘာဖြစ်နိုင်လဲဖြေဆေးရောရှိလား)။
အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကြုံလာခဲ့ရင်တော့ ငါတွေးမိတာက မိန်းကလေးက သူ့ဟာသူ ပီးအောင်
သာကြံဖန်လုပ်ပေတော့ဒါပဲရှိမယ်။အေး မိန်းကလေးက ပီးအောင်လုပ်ရင်လည်း သုံးချီလောက်
တော့ လုပ်ပစ်လိုက်မှ ဆေးပါဝါကျသွားမယ်ထင်တယ် ငါထင်တာပြောတာနော် အကောင်းဆုံး
ကတော့ ယောက်ကျားတစ်ယောက်နဲ့ စိတ်ပါလက်ပါစခန်းသွားလိုက်မှပဲ အေးမှာပေါ့ကွာ)
(အိုကေပါ သယ်ရင်းရယ် မင်းကျေးဇူးမမေ့ပါဘူး ဟားဟား)
(မြင့်မောင်..မစိုးကြီးက မင့်အကြိုက် အစိကြီးတယ် အရည်ရွှမ်းတယ်ကွ) လုပ်သွားသေးသည်။
ပြောသမျှတွေကို မိအေး အစ အဆုံးကြားသွားလည်း ကျုပ်မရှက်နိုင်တော့ပါ။ခုအရေးကြီးတာ
က မိအေးကို ဆေးတန်ခိုးပြယ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာပါပဲ။
( ဒုက္ခပါပဲ အဖေ ရယ်..သမီးကိုက ရှည်တာပါ အဖေလုံးဝ မမှားပါဘူး ခုတော့ သမီးဘာဆက်လုပ်ရမလဲ ဟင်အဖေ..ဆရာဝန်သွားပြရင် ကောင်းမလား) (အာ..သမီးကလည်းဘယ်ဖြစ်မလဲ ဒီဆေးကတားမြစ်ဆေးပါဆို အဖေတို့နှစ်ယောက်လုံးအဖမ်းခံရမှာပေါ့ ဟင်း..ဒုက္ခ..ခုသမီးဘယ်လို ခံစားရလဲ ဟင်)
( ဟို..အဖေ့သူငယ်ချင်းပြောသလို မိတ်ကိုက်သလိုမျိုးတော့ခဏဖြစ်တာကြာပီ..ခုတော့ဘယ်
(ဟုတ်ပီ ဒီလိုလုပ်သမီးခုရေအေးအေးနဲ့ ချိုးချလိုက် နဲနဲတော့စိတ်ပြေသွား
မှာပဲ ပီးမှ သနခါးကို တစ်ကိုယ်လုံးလိမ်းကြည့်လိုက် စိတ်ကြည်တာပေါ့သမီးရယ်)
( ဟုတ်အဖေအတော်ပဲ သမီးရေမချိုးရသေးဘူး ချိုးလိုက်မယ်)
(အေး သမီးဟိုစိတ်ကိုဖျောက်ထားလိုက်နော်အဖေ စောင့်နေမယ် ရေချိုးရင်းတစ်ခုခုဆို အဖေ့ကိုခေါ်လိုက်)။
ချွေးမလေးကို စိတ်ပူနေ၍ကျုပ်ဆေးသောက်ထားတာ မေ့သွားသည်။ရေချိုးနေသော မိအေးထွက်အလာကိုစောင့်နေရင်း နဲ့ကျုပ်တစ်ကိုယ်လုံး ရှိန်းကနဲဖြစ်သွားပီး လိင်ဆက်ဆံချင်စိတ်ကဟုန်းကနဲပေါ်လာသည်။လီးကလည်း သခင့်စိတ်တိုင်းကျပေါ့။
ဟုပြောပီးမိအေးကအခန်းထဲပြေးဝင်သွားသည်။နဲနဲတော့စိတ်အေးသွားသည်။ကဲကျုပ်လည်း ဂွင်းတစ်ချီလောက်တော့ထုလိုက်မှဟုတွေးပီးကိုယ့်အခန်းကိုယ်ပြန်လိုက်သည်။ကိုယ်တုံးလုံး ချွတ်ရင်းဘီဒိုရှိမှန်ကိုကြည့်ကာဂွင်းစပီးထုလိုက်သည်။ဟားအတော်ထုလို့ကောင်းတာပဲ၊ စိတ်တွေကထကြွနေသည်လေ။တစ်ကိုယ်လုံးလည်းတစ်ခါမှမဖြစ်ဖူးသောပူနွေးနွေး၊ရှိန်းတိန်း ဖိန်းတိမ်း ခံစားနေရသည် ။ထိုစဉ်အောက်မှ မိအေးအော်သံကြားလိုက်ရသည်။
( အဖေ ရေ..လာပါအုံး)။
ဒုက္ခပဲ ကျုပ်ကလည်း လီးထိပ်ကအရည်ကြည်လေးတွေလိုက်လာနေတုန်း..။ကဲ တတ်နိုင်ပါဘူး
ကျုပ် ပုဆိုးပဲကောက်စွပ်လိုက်ပီး ပြေးဆင်းလိုက်သည်။သူတို့လင်မယားအခန်းတံခါးက အသင့်ပွင့်နေတာကြောင့်..။ ဟင်..ထမီရင်ရှားနှင့် မိအေး မှန်တင်ခုံရှေ့ဝယ် ကပိုကယိုဖြင့်..
ခြေသလုံးကို နှိပ်နေသည်။ ကျုပ်သူ့ဘေးဝင်ထိုင်လိုက်ရင်း
( ဘာဖြစ်တာလဲ သမီး)
(ကြွက်တက်လို့ အဖေ အား..နာလိုက်တာ တစ်ခါမှမဖြစ်ဖူးပါဘူးနော်)။
အင်း ကျုပ်ထင်တာတော့ကြွက်တက်တာမဖြစ်နိုင်၊ဆေးတန်ခိုးကြောင့် ပေါင်တွင်းကာမ အကြောတွေတင်းလာတာဖြစ်မည်။ကျုပ်..ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတာနဲ့ ခြေသလုံးသားလေးတွေကို နှိပ်ပေးလိုက်သည်။ပိုဆိုးလာသည်ဆေးတန်ခိုးပြသည်ကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့နေရပီကော။ ခြေသလုံးနှိပ်ပေးနေရင်းမိအေးကပေါင်တွေပါလိမ်ကုန်ပီ။ထမီကပြေသွားပီးနို့တွေပါပေါ်လာပီ။ထမီပြန်ဝတ်ပေးမယ်လုပ်တော့ကျုပ်ကို မိအေးက
(ဖြစ်ပါ့မလားသမီးရယ်တစ်ခုခုဖြစ်သွားမှဖြင့်..အဖေဟိုဖက်လှည့်နေမယ်လေ..အဖေ့ကိုမရှက်နဲ့နော်သမီး.. ဒီကိစ္စကဘယ်သူမှအသိခံလို့မဖြစ်ဘူးသမီးဝေဒနာတွေပျောက်သွားမှအဆင်ပြေမှာ.လုပ်လုပ်သမီး တစ်ချီပီးအောင်လုပ်ပစ်လိုက်)။
မိအေးဆီကစကားပြန်မရတော့။သူ့ကိုကျောခိုင်းနေရင်းကကျုပ်လီးကတစ်စခန်းထပြန်သည်။ မမြင်စေချင်ကာမှပိုကြည့်ချင်လာသည်။အသာငဲ့ကြည့်လိုက်တော့မိအေးမှာကျုပ်ကိုပင်ဂရုမ စိုက်နိုင်တော့ထမီကပိုကယိုနှင့်ပင်လက်လျှိုနှိုက်၍ဆောက်ဖုတ်ကိုပီးအောင်ကလိနေပီ။သူ့ဆီက အသက်ရှူသံပြင်းပြင်းသာကြားရသည်။ ခဏနေတော့ မိအေးခမြာမရှက်နိုင်တော့ (အား..ရှီး..အမလေး နော်.ကောင်းတယ်..အ..အ)။…..အော်သံဆုံးတော့…..။
(အား ..အိ..အိ…အဖေရေသမီးပီးလို့မရဘူး တစ်မျိုးကြီးပဲ အ အ ဖေရယ်..)။
တစ်ကိုယ်လုံးနတ်ပူးနေသလိုတုန်ရင်နေပီးတွန့်လိန်နေတဲ့ချွေးမကိုကြည့်ပီးကျုပ်တော်တော် လန့်သွားတယ်၊အဟုတ်ပြောတာ ..။ တစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်ဒုက္ခ။
(သမီးလေး..သတိထားလေ…ပီးအောင်လုပ်လိုက်လေသမီးရယ်ဒါမှသမီးသက်သာမှာ..အဖေ့ကို ရှက်မနေနဲ့တော့နော်သမီးစိတ်ထဲရှိသလို လုပ်လိုက်..ရအောင် ပီးချလိုက် )
မိအေးဟာမရှက်နိုင်တော့ပဲကျုပ်ရင်ခွင်ထဲကိုမှီလိုက်ရင်းခြေဆင်းကာထမီကိုဗိုက်ပေါ်ဆွဲပုံလိုက်ပီးပေါင်ခွကြားထဲလက်နှိုက်ပီး တစ်ချီပီးအောင်ဇောင်းတိုက်နေပါပီ။ လက်နှစ်ချောင်းပူးပီး အဖုတ်ပေါက်ထဲကို ထိုးကလိနေပါပီ…။ ကျုပ်ကလည်း သူ့ပခုံးလေးကိုထိမ်းကိုင်ရင်း
( လုပ်..သမီး လုပ် ပီးအောင် လုပ်ချလိုက်ဘာမှ မဖြစ်ဘူး အဖေရှိတယ်)။
ဆောက်ဖုတ်ထဲကိုလက်နှိုက်ပီးကလိနေတာ အရည်တွေဘယ်လောက်ထွက်နေတယ်မသိ၊ တပြွတ်ပြွတ် အသံကထွက်နေတယ်..။ အင်း…..ခက်တာက မိအေးဘယ်လိုပဲ ဆောက်ပါတ်ကို ထိုးပီး ပီးအောင်လုပ်ပေမယ့် မပီးနိုင်ဖြစ်နေလို့ စိတ်တွေတိုလာပီး အားမလို အားမရ ဖြစ်နေ ပါတယ်။ ပီးမှ ငိုသံပါကြီးနဲ့
( အဖေ ရယ် သမီးပီးလို့မရဘူး..ပီးတာကပီးချင်နေပီ..အီး..သမီးကို သတ်ပစ်လိုက်ပါ
(အို သမီးရယ်..အဖေရှိနေတာပဲကွယ် မကြောက်နဲ့နော်..ပီးတော့ သမီးခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာကို သက်သာအောင်လုပ်ပေးတယ်လို့ပဲသဘောထားနော်..သမီးစိတ်ကိုတင်းမထားနဲ့ လျော့ချလိုက်တော့ သမီးပီးအောင် အဖေပါကူပီး လုပ်ပေးမယ် နော် သမီး)
စကားပြန်မပြောတာကြောင့် ကျုပ်ဟာ အပေါ်ပိုင်းဗလာဖြစ်နေတဲ့ မိအေးရဲ့ နို့တွေကိုပင့်ကိုင်
လိုက်ပါတယ်။နို့သီးလေးတွေကို ချေပေးလိုက်တော့ (အာ့..အား..အဟင်းဟင်း)ဖြစ်လာပါပီ။
သူကိုယ်တိုင်က ဟော့နေတာကြောင့် နို့တွေကိုခပ်ကြမ်းကြမ်းစို့ပေးလိုက်ပီး လက်ခလည်နဲ့
(အား..အဖေ..ရယ်..အီး..ဟင့်..ကောင်းတယ်..စို့ပေးအဖေ နာနာစို့ဟုတ်တယ် အဖေ သမီးကောင်းလာပီ..အအောင်မလေးကောင်းလာပီ..အိုးလာတော့မယ်အဖေအစိကိုဖိချေပေး၊အား အိုးအင်း..အဖေရယ်ပီးချင်နေပီ..အားပီးလို့လဲမရပြန်ဘူး..ဟား..ကွာ)။
ဆေးတန်ခိုးကြောင့်မိအေးရဲ့လိင်စိတ်တွေဟာသူမတူအောင်ပေါက်ကွဲနေပါပီ။ကျုပ်သိလိုက်ပီ လေ ဒါ့ကြောင့်
( သမီးလေး မိအေး.)
( ..အင်ဟင်.. ရှန်..အဖေ.ဟင်း)
လည်ပြန်လေးစောင်းငဲ့ပီးပြန်ထူးတဲ့ မိအေးနားနားလေးကို ကပ်ပီးကျုပ်ပြောလိုက်တယ်။
( သမီးလေး ပီးသွားအောင် အဖေ သမီးအဖုတ်ကို ယက်ပေးမယ် နော်ဟုတ်ပီလား)
(သမီးလေးကအဖုတ်ယက်ပေးမှပီးတယ်ဆိုတာအဖေသိပီးသားပါ…အဖေ့ကိုအားမနာနဲ့..သမီးတစ်ချီလောက်ပီးလိုက်မှ သက်သာမှာ သမီးရဲ့..ပီးတော့ အဖေကိုယ်တိုင်ကလည်း ဟောဒီသမီးလေးကို ပီးအောင်လုပ်ပေးချင်နေတာပါကွယ် )
(ဟင့်..အဖေ ရယ်..သမီးကို သက်သာအောင်သာလုပ်ပေးပါတော့ အဖေရယ်..သမီး အရမ်းကို ပီးချလိုက်ချင်ပီ)….။
မိအေးကို အသာတွန်းလှဲလိုက်ပီး ပေါင်ကြားထဲကို ကျုပ်ခေါင်းထိုးထည့်လိုက်တယ်။အဟင်း..
တိုးမောင်က ကျုပ်သားပါဗျ ကြည့် မိအေးဘယ်လိုအော်သလဲဆိုတာ….။….။ဆောက်ဖုတ်က လေထိုးထားသလိုဖောင်းနေတာ ဒီတစ်ခါပဲမြင်ဘူးသေးတယ်..။ဒီတော့ ပဏာမ နှူးနှပ် တာ တွေ လုပ်မနေတော့ဘူး။ အကွဲကြောင်းတစ်ခုလုံးကို ပါးစပ်နဲ့ငုံပီး အားနဲ့စုပ်လိုက်တယ်။
( ဟင့် .အဖေ..အား ဟင့်ကောင်းတယ် အဖေရယ် ယက်..ယက်..အား အဖေက သိတ်ယက်တတ်တာပဲနော်..အမလေးဟုတ်တယ်စုပ် အစိကိုစုပ်ပေးအား သမီးပီးတော့မယ် အဖေမရပ်နဲ့..အ.အ.အအအောင်မလေးပီးပီအဖေရေ..ထွက်ပီ..သမီးထွက်ပီ..အီး..ရှီးး)
ကျုပ်ခေါင်းကိုသူ့ဆောက်ပါတ်ထဲဆွဲဆောင့်ပီးသွင်းချလိုက်ရင်းကျုပ်ချွေးမလေးတစ်ချီကောင်း ကောင်းပီးသွားချေပီ။ပေါင်ကြားထဲကမော့ ကြည့်နေတဲ့ ကျုပ်မျက်နှာကိုချွေးမလေးက ရွှန်းရွှန်းစားစားကြီးကြည့်ရင်း
( ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ အဖေရယ်..ခုမှပဲ သမီးပေါ့သွားတော့တယ် အဟင်း)
( အဖေ ယက်ပေးတာကောင်းလား ဟင် သမီး)
ဆောက်ရေတွေပေပွနေတဲ့ ကျုပ်မျက်နှာကို နမ်းလိုက်ရင်း မိအေးက
( ဟင်း တိုးမောင် ယက်ပေးတာထက် ကောင်းတယ် အဖေရယ်)
( သမီးလေး ဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့တော့နော် အဖေတို့ ဆေးအစွမ်းနောက်ကိုပဲလိုက်ကြရအောင် အဖေလည်း ဆေးသောက်လိုက်ပီ..ဒီမှာ ကြည့်ပါဦး)။
ဆေးအစွမ်းဟာတစ်ကယ်ပဲအရှက်မဲ့စေပါတယ်။မိအေးမျက်နှာရှေ့မှာကျုပ်ဟာပုဆိုးချွတ်ချ လိုက်ပါတော့တယ်။ ရှေ့ပြေးအရည်ကြည်တွေ တွဲလဲခိုနေတဲ့..ကျုပ်လီးကြီးက အသင့်….။
( အောင်မလေး တော့ အဖေ့ဟာကြီးက နဲတာကြီးမဟုတ်ဘူးအားရစရာကြီး အဖေရယ်)
ကျုပ်လီးကို သေခြာကိုင်ကြည့်ရင်း မိအေးတံတွေးမြိုချနေပါတယ်။ကျုပ်တောင်မခိုင်းရသေးပဲ ဒစ်ကိုငုံလိုက်ပါတယ်။
ကျုပ်မတ်တတ်ရပ်လျက်ပေါင်ကားပေးလိုက်ပါတယ်။ကျုပ်ဆီးခုံကိုလျာနဲ့ယက်လိုက်တာက တော့ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ကျုပ်ကို ခွင့်တောင်းသလိုအကြည့်နဲ့မော့ကြည့်လိုက်ပီး လီးတစ်ချောင်းလုံးကို ငုံချလိုက်ပါတယ်။
ကျုပ်ချွေးမနှာထန်ချက်ကတော့ဗျာ (ဆေးကြောင့်ထင်ပါရဲ့)လီးကို အသံတွေထွက်အောင်ကို
တဗြွတ်ဗြွတ်စုပ်နေပါတော့တယ်။ခဏနေတော့ ကျုပ်တင်ပဆုံကြီးတွေကို ဆွဲဆွဲပီး ပါးစပ်ထဲ
ကိုဆောင့်ဆောင့်နေတော့ သူ့ပါးစပ်ကို လိုးခိုင်းတာပဲလို့သဘောပေါက်ပီး သူ့ခေါင်းလေးကို
ကိုင်တဲ့ပီး ပါးစပ်ထဲကို ကျုပ်လီးဝင်နိုင်သမျှဝင်အောင်ဆောင့်လိုးပေးလိုက်ပါတယ်။
(အား.ကောင်းတယ် သမီးရယ် စုပ်ကွာ..ဟား..အီး..သမီးရေ အဖေ ကောင်းလာပီကွာ..စုပ်..
ဒစ်ကိုလျာနဲ့ထိုးပေးတာကောင်းလွန်းလို့ကျုပ်ပီးချင်လာပီ။ဆေးအစွမ်းလဲပါမှာပေါ့။လီးကသံ ချောင်းလိုမာတောင်နေပီးပူလာပီ.လဥတွေထဲကနေပီးကျင်တက်လာပီ။ကျုပ်ကောင်းကောင်း ကြီးပီးချင်လာတာမို့
(အား သမီး အဖေ ပီးတော့မယ် စုပ်စုပ် ကောင်းတာကွာ..အ..အ..ထွက်တော့မယ် ဖယ် သမီး အဖေအပြင်မှာထုတ်လိုက်မယ်….)
(ဟင့်အင်း သမီးပါးစပ်ထဲမှာပဲ ပီးလိုက်အဖေ ရတယ်)
(အာ..သမီးရယ်..အဖေက ပီးရင် အရေများတယ်သမီးလေး…ရဲ့)။
ကျုပ်ကိုမိအေးစကားမပြန်တော့ပဲ လီးစုပ်နေရင်းက ဥတွေကိုပါ ဖွဖွလေးဆုပ်ပေး ပွတ်ပေးနေ
(အား..အဖေပီးပီ သမီးရေ..မစုပ်နဲ့တော့ ငုံထားပေး ..ထွက်ပီ..အား..အား)
ကျုပ်တစ်ကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့ သွေးတွေပါထွက်ကုန်ပီလားထင်ရလောက်အောင် ကျုပ်လရေတွေ
ဟာ ဒလဟောထွက်ကုန်ပါတော့တယ်။ဂွင်းမထုတာလဲကြာတဲ့အပြင် သောက်ထားတဲ့ဆေးရဲ့
အာနိသင်ကြောင့်ထင်ပါရဲ့ ဒစ်ကိုငုံနေတဲ့ ချွေးမလေးမှာ ကျုပ်လရေတွေကို ဂွတ်..ဂွတ်နဲ့အသံ
(ကောင်းလိုက်တာ သမီးရယ်..ကျေးဇူးပါကွယ်..အဟင်း..အဖေ့အရေတွေက များတယ်ကွဲ့)။ ကျုပ်သုတ်ရေတွေကို ကုန်သည်အထိမျိုချနေတဲ့ မိအေးကိုကျုပ်အားနာသွားတယ်။
( အဟင်း..အဖေ့ဟာတွေက ပြစ်ခဲနေတာပဲမနဲမြိုချရတယ်..ကောင်းလား အဖေ)
(အရမ်းကောင်းတယ် သမီးရယ်..အဖေဒီလို မကောင်းရတာကြာပီ..ကျေးဇူးနော် သမီးလေး)။
မိအေးဟာထမီကိုပြန်ရင်လျားလိုက်ပီးကျုပ်ရှေ့ကခေါင်းလေးငုံ့ကာရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားတာ ကြောင့်ကျုပ်လည်းအခန်းကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကာမစိတ်တွေငြိမ်းသွားမှပဲအော်ငါတော့ဆေးတံခိုး ကြောင့် အမှားကြီးမှားလေပီဟုနောင်တရနေလေတော့သည်။
ကုတင်ပေါ်လှဲအိပ်လိုက်ရင်း မထင်မှတ်ပဲ စောစောကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်များကိုပြန်တွေးကြည့်တော့ နှစ်ယောက်လုံးမမှား။ချွေးမဖြစ်သူ၏ပေါ့ဆစွာ ကော်ဖီမစ်ထုပ်အားမမေးမြန်းပဲသောက်လိုက်မိခြင်းကသာအဓိကပြသနာ။ကျုပ်မျက်စိထဲမှာတော့ ချွေးမဖြစ်သူ၏ ဆောက်ပါတ်ကြီးကတစ်ဝဲလည်လည်မြင်ယောင်နေမိသည်။ဆောက်ပါတ်အနေအထားကိုကြည့်လိုက်တာနှင့် လိုး၍ကောင်းသော ဆောက်ပါတ်မှန်းသိသည်။လျာထိုးအထဲ့တွင် အခေါင်းထဲကကြွက်သားများ ၏စုပ်အားကသန်မာလှသည်။ချွေးမလေး လီးအစုပ်ကောင်းပုံကလည်းအောချလောက်သည်။ဆေးအစွမ်းကြောင့်မရှက်နိုင်အောင် ကျုပ်တို့၂ယောက်လုံး နှာထန်လိုက်တာပြန်တွေးရင်း နဲ့ကျုပ်လီးက တောင်လာပြန်ပီ။အင်း..နောက်တစ်ချီလောက်တော့ ပီးလိုက်မှ ဆေးပါဝါ ကျသွားမည်ထင်သည်။ည ကျမှပဲ ဂွင်းထုလိုက်တော့မည်ဟုတွေးရင်း စိတ်လျော့လိုက်တော့ မှေးကနဲအိပ်ပျော်သွားလိုက်တာ ချွေးမဖြစ်သူ လှုပ်နှိုးမှသာနိုးလေတော့သည်။( အဖေရယ်အိပ်လိုက်တာ..ခေါ်လို့မရလို့သမီးတက်လာတာ..ထတော့အဖေညစာစားရအောင် ၈ နာရီထိုးတော့မယ်)ချွေးမရဲ့အကြည့်က ပုဆိုးလျောကျနေသော ကျုပ်ပေါင်ကြားက လီးဆီသို့။( အေးကွာ ဘယ်လိုအိပ်ပျော်သွားလည်းမသိဘူး အဖေလာခဲ့မယ် သမီး)။ညစာထမင်းပွဲရှိဟင်းများထဲမှရုံးပဒီသီးကြော်နှင့်ကြက်ဥဟတ်ဘွိုင်၂လုံးတို့ကထူးခြားနေသည်။(စား အဖေအားရှိအောင်လို့ သမီးစီစဉ်ထားတာ)ချွေးမ၏အသံက ခပ်တိုးတိုးသာ။ထမင်းစားပီးတော့ ကျွဲရိုင်းဗူးပေးလာပြန်သည်။ကျုပ်တို့ ၂ယောက်လုံး စကားမပြောဖြစ်ကြပဲအတွေးကိုယ်စီဖြင့် ဧည့်ခန်း တီဗီရှေ့တွင် ထိုင်နေကြ၏။ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှကို စကားမစဖြစ်ကြတော့ပေ။နိုင်ငံတကာသတင်းပီးတော့ ၉ နာရီကျော်နေပီ။(အဖေ အိပ်တော့မလား)(အေးကွယ် အိပ်တာပေါ့ သမီးရော)(အိုးခွက်တွေ ဆေးပီးအိပ်မယ်..အဖေ…)ချွေးမမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော့ ကျုပ်ကိုစိုက်ကြည့်နေသည်။ကျုပ် အိမ်မကြီးတံခါးပိတ်ပီးပြန်လာတော့ ချွေးမဖြစ်သူက ဧည့်ခန်းတွင်မတ်တပ်ရပ်လျက်။သူ့အနား ကျုပ်ရောက်တော့ သူ့ပခုံးလေးကိုခပ်ဖွဖွကိုင်လိုက်ပီး( နေ့လည်က အစဉ်ပြေလားသမီး..ဟင်)( ပြေပါတယ် အဖေ့ကိုလဲသမီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်.ဟို ပီးတော့..) (အဖေနားလည်ပါတယ်သမီးရယ် အဖေတို့ဖောက်ပြန်ကြတာမှ မဟုတ်တာ ဝေဒနာကို ကာကွယ်လိုက်ကြတာပဲလေ စိတ်ထဲမထားပါနဲ့ သမီးရယ်)ချွေးမကဘာစကားမှမပြောပဲ ခေါင်းကိုငုံ့ထားသည်။ပခုံးကို ကိုင်ထားသောကျုပ်လက်ကို သူကအုပ်ကိုင်ရင်း ကျုပ်ကိုကြည့်တယ်။ ချွေးမမျက်လုံးတွေက အရောင်တွေလက်လို့ပါလား။(ဟုတ်ပီလား သမီး..ဟင်..သမီးဘာပြောချင်လို့လဲ..ပြော အဖေ့ကို အားမနာနဲ့ နော် သမီး)(ဟို…အခုရော…အဖေရော အဆင်ပြေရဲ့လား ဟင်)(ပြေပါတယ် သမီးရယ်.သမီးကိုလည်း အဖေက ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..သမီးရော အခု နေသာထိုင်သာရှိရဲ့လား)။ချွေးမဖြစ်သူက သက်ပြင်းတစ်ချက်ချရင်း (ဟို..သမီးလေ..အားမရသေးဘူး အဖေ..ဟိုစိတ်တွေပြန်ဖြစ်လာပြန်ပီ အဖေရယ်..ဟင်း )ကျုပ်သိတာပေါ့ ဆေးအညွှန်းမှာကိုက၃ချီလောက်မှ နေသာထိုင်သာပါတဲ့ဆိုအဟင်း။ ချွေးမရဲ့ပခုံး၂ဖက်ကို ကျုပ်ဆုပ်ကိုင်လိုက်ရင်း( အဖေလည်း အတူတူပါပဲ သမီးရယ်..သမီးကိုပြောရမှာအားနာလို့..အဖေလည်း စိတ်တွေဖြစ်နေပြန်ပီကွယ်)ချွေးမဟာကျုပ်ရင်ခွင်ထဲကို တိုးဝင်လိုက်ပီးဖက်ထားလိုက်ပါတယ်။( အဖေရယ်..သမီးကို နားလည်ပေးပါ နော်)။ ချွေးမကို ကျုပ်ပြန်ဖက်ထားလိုက်ရင်းနောက်ကျောကိုပွတ်ပေးနေလိုက်တော့ချွေးမဟာ ဘော်လီဝတ်မထားဘူးဆိုတာသိလိုက်ရတော့ လီးကတန်းကနဲတောင်သွားလိုက်တာ ချွေးမပေါင်ကို ထိုးမိသွားပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်နှာကို ဆွဲမော့လိုက်ပီးမျက်လုံးချင်းဆုံကြည့်ကာ သူ့နှုတ်ခမ်းပေါ်ကိုကျုပ်နှုတ်ခမ်းထိမိတယ်ဆိုရင်ပဲသူ့ဆီကမွတ်သိပ်တဲ့အနမ်းတွေစပီးရောက်လာပါတော့တယ်ဗျာ။ချွေးမရဲ့ဖင်တုံကြီးတွေကိုကိုင်ပီးချေပေးလိုက်တော့သူကကျုပ်လီးကို လှမ်းနှိုက်ပါတယ်။ကဲ ကျုပ်တို့၂ယောက်ကို ဆေးတန်ခိုးကပြန်ဦးဆောင်သွားပြန်ပီပေါ့ဗျာ။( သမီးလေး..အရမ်းခံစားနေရပြန်ပီလား ဟင်) (ဟုတ်တယ် အဖေရယ် တစ်ကိုယ်လုံး ယားနေသလိုပဲ..ဟင့်)(လာ သမီး ဆိုဖာပေါ် ထိုင်လိုက်နော်..အဖေလုပ်ပေးမယ်)( အဖေကလည်း ဧည့်ခန်းကြီးမှာ ဟင့်)( အော် ဘာရှက်စရာရှိလို့လဲသမီးရယ် အဖေတို့၂ယောက်ပဲ ရှိတာကို) ချွေးမလည်းထိုင်လိုက်ရော ကျုပ်ဟာ သူ့အကျီကိုစပီး ချွတ်လိုက်ပါတယ်။ဖွေးကနဲပေါ်လာတဲ့ နို့တွေကို ပင့်ကိုင်လိုက်ရင်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး စို့ပေးလိုက်ပါတယ်။( အား..ရှီး..စ်စ်..အဖေရယ်..ဟင့်) ကျောကော့တက်သွားပီး နို့တွေက ပိုကြီးလာပါတယ်။( အဖေ ရယ်..အ..စို့..စို့ပေး ဟုတ်တယ်..အမလေး ကောင်းလိုက်တာ အဖေရယ်)နို့စို့နေရင်းနဲ့ ကျုပ်ဟာ သူ့ထမိန်ကိုမ တင်လိုက်တော့(အာ.အဖေ..အပေါ်မတင်နဲ့လေချွတ်လိုက်အကုန် ချွတ်လိုက်)ကျုပ်ဆွဲချွတ်လိုက်တော့သူက ဖင်ကိုကြွပေးပါတယ်။ခုတော့ ဆက်တီဆိုဖာပေါ်မှာ ကျုပ် ချွေးမဟာ ကိုယ်တုံးလုံးဖြစ်သွားပီ။(အာ..အဖေကလည်းအဲ့လိုကြီးကြည့်မနေနဲ့လေ.အဟင်းဘာမှန်းလဲမသိဘူး) ကျုပ်ဟာမတ်တပ်ရပ်လိုက်ရင်းပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်ပါတယ်။တောင်နေတဲ့ ကျုပ်လီးကို ချွေးမက သေခြာကြည့်နေပါတယ်။( သမီးလေး..)( ရှင် အဖေပြော)(ပေါင်ကားလိုက်စမ်း သမီး)( အဖေ ရယ် ဘာလုပ်မလို့လဲ )(လုပ်ပါသမီးရဲ့.ပေါင်ကားလိုက်..သမီးဆောက်ပါတ်ကြီးကြည့်ချင်လို့)(ဟင့်..အဖေကလည်း)ပေါင်အကားမှာသူ့ဆောက်ပါတ်အကွဲကဟသွားတာကြောင့်အထဲကအရေကြည့်စိမ့်နေတာပါ မြင်နေရပါတယ်။(လက်နဲ့ ဖြဲပြစမ်း သမီး)( အိုး..အဖေရယ်..ကဲ ရော့ ကြည့် အဖေ)ကျုပ်ဟာချွေးမပေါင်ကြားမှာထိုင်ချပီးအနီးကပ်ကြည့်လိုက်တော့ချွေးမဟာစိတ်တွေထန်လာပုံ ရပါတယ် ဆောက်ပါတ်ကိုသေခြာဖြဲပြနေပါတယ်။( အရေတွေတောင် စိမ့်နေပီပဲ သမီးရဲ့)(ဟုတ်တယ် အဖေ..ညနေက အဖေ့ကိုလာနှိုးတော့အဖေ့ဟာကြီးကိုမြင်ပီးကတည်းက ယားနေတာအဖေ ရဲ့..အဟင်း..ဟင်း..)ကျုပ်ဟာ အကွဲကြောင်းထဲကို လျာထိုးထဲ့လိုက်ပါတယ်။(အား..ဟားးအဖေရယ်..ကောင်းလိုက်တာနော်ယက်ပေးအဖေ.ယက်တာအရမ်းကောင်းတာပဲ)ကျုပ်ဟာ နှာခေါင်းတွေပါမြုပ်ဝင်သွားအောင် ချွေးမ ရဲ့ဆောက်ပါတ်ကိုယက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ (အာ..သေပီ အဖေရယ်..ထိတယ်..အဖေယက်တာ အဖေ့သားထက် ကောင်းတယ်..အီး.) ချွေးမဟာဖင်တွေမြောက်တက်နေအောင်ကောင်းနေပါတယ်။မြောက်တက်လာတဲ့တင်ပဆုံကြီးကိုအောက်ကပင့်ကိုင်လိုက်ရင်းညိုညစ်ညစ်စအိုဝလေးကိုပါသိမ်းကျုံးပီးယက်လိုက်ပါတယ်..။( ယက်အဖေ..အား..ဟင့်..အာ ဘာလို့ဖင်ပေါက်ကို ယက်တာလဲ အဖေ..မရွံဘူးလား)ကျုပ်ဟာ ချွေးမကို ပညာကုန်သုံးပီး ဆောက်ပါတ်ယက်ပေးနေပါတယ်။ဖင်ပေါက်ဝ စူတူတူလေးကို လျာထိုးအထဲ့မှာတော့(အ..အ..ဖေ..အ..မလုပ်ပါနဲ့ ဆို ကွာ..အ..ဟား ယားတယ်)။ခဏနေတော့ ချွေးမလေး ဟော့လာပါပီ။ ပီးချင်ပီထင်ပါရဲ့။ဆေးအရှိန်ကြောင့် အရှက်တရားတွေ ပျောက်ကွယ်ကုန်ပါပီကောဗျာ။( အား..အဖေရေ..ကောင်းတယ်..အိုး ဟုတ်တယ် ယက်အဖေ..ကောင်းလိုက်တာ ဟင့် သမီး အဖုတ်ကြီးစိမ့်တက်နေပီ အဖေရဲ့.အား အမလေး )အပေါ်ကိုကော့တက်သွားပီး ချွေးမလေးဟာ ကျုပ်မျက်နှာကို သူ့ဆောက်ပါတ်ထံမှ ဆွဲခွာလိုက်ပါတယ်။( ပီးတော့ မလားသမီး..အဖေပီးအောင် မှုတ်ပေးမယ်လေ နော် ပီးလိုက်လေ သမီး)(ဟင့်အင်း အဖေ..သမီးမရတော့ဘူး..သမီးကို လိုးပေးပါအဖေ..အလိုးခံရမှ သမီး ပီးမှာ ဟင့်)(အဖေ လိုးတာခံချင်တယ်ပေါ့ သမီးက)( အာာ..ဟုတ်တယ် အဖေ..သမီးကို လိုးပေးပါနော်)(ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ လိုးပေးရမလဲ သမီးပြော)( ဒီအတိုင်းပဲ တက်လိုးပေး အဖေ သမီး အရမ်းကိုကောင်းနေပီ အဖေရဲ့)ကျုပ်ဟာ ချွေးမလေးရဲ့ပေါင်တွေကို လှန်တင်လိုက်ရင်း ပြဲအာနေတဲ့ဆောက်ပါတ်ဝ ဆီကို ကျုပ်ရဲ့လီးဒစ်ကိုမေးတင်ထားလိုက်ပါတယ်။ပီးမှသူ့ရဲ့ထောင်နေတဲ့အစိကိုဒစ်နဲ့ပွတ်ပေးလိုက် ပါတယ်။ဆောက်ပါတ်အ၀ ကိုဒစ်နဲ့ပွတ်ဆွဲလိုက် ချော်ထိုးလိုက်နဲ့ကျုပ်ဟာ ချွေးမလေး စိတ်ပိုထလာအောင်ကလိပေးနေပါတယ်။( အောင်မလေး အဖေ ရယ်..ကလိမနေပါနဲ့တော့..လိုးလိုက်ပါတော့ သမီးသေတာ့မယ် အဖေရယ် အလိုးခံချင်နေပီ..အား)ချွေးမလေးခမြာဘယ်လောက်တောင် ရွထနေလဲဆိုရင် ကျုပ်လီးဒစ်ကို ဆောက်ပါတ်ထဲမြုတ်တယ်ဆိုရုံလေးထိုးထဲ့လိုက်တာနဲ့ကိုပဲ ပီးလုပီးခင်ဖြစ်သွားပါတယ်။(အ..ဟုတ်တယ် အဖေ ထိုးလိုက်..လိုးလိုက်အဖေ သမီးပီးချင်လာပီ..လုပ်ပါအဖေရယ် သမီးကို မနှိပ်စက်ပါနဲ့တော့အဟင့်)ကျုပ်ငြိမ်နေလိုက်ပီး နို့တွေကိုကုန်းစို့လိုက်ပါတယ်။(အ.ဖေ့..အီး..ဆောင့်လိုးလိုက်ပါတော့..အဖေရယ်.ဆောက်ပါတ်ထဲကယားနေပီဖေရဲ့..နော်)( သမီးကို တစ်ခါမှ မခံစားဘူးတဲ့…..အရသာတွေ အဖေပေးချင်လို့ပါကွယ်..နော်..ခု ဖေ့လီးကို သမီးဆောက်ပါတ်ထဲတစ်ရစ်ချင်းသွင်းပေးမယ်..သမီးစိတ်တွေကိုလျော့ပီးဖေ့လီးဝင်လာတာကို ခံစားလိုက်..ဖေ ဆောင့်မလိုးဘူး.ငြိမ့်ငြိမ့်လေး လိုးမှာ..နော်)( ဟုတ် အဖေကြိုက်သလိုသာ လိုး သမီးခံမယ်သိလား.အ.အ..၀င်တယ် အဖေရေဟုတ်တယ် ဖေ့လီးကြီးဝင်လာပီ..အား ကောင်းလိုက်တာ အဖေရယ်.အဖုတ်ထဲပြည့်နေတာပဲ.လိုး..လိုး အဖေ..အားဖေ့လီးကရှည်လိုက်တာ သားအိမ်တောင်ထောက်တော့မယ်မဆုံးသေးဘူးလား ဖေ့..အားရှီး..)( ဆုံးတော့မယ် သမီးရဲ့..အား..ကောင်းလှချီလားသမီးရယ်..ညီး ဆောက်ပါတ်က အဖေ့လီးကိုညှစ်ထားတာကောင်းတာကွာ..သမီးမှာမျှော့ပါတာပဲကွာမိုက်တယ်..လီးဆုံးပီသမီး..အဖေ မွှေပေးမယ်..သမီး ပီးချလိုက်တော့) ကျုပ်ဟာ…..ဖင်ကို ဇကောဝိုင်းလှည့်မွှေပေးလိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ(အဖေ..အ..အား ပီးပီ.သမီးပီးပီ အဖေ ရေထွက်ပီ..ဟားးး..အိ..အ )ချွေးမလေးဟာကျုပ်ကိုတင်းကြပ်စွာဖက်ထားရင်းတွန့်လိန်ကောက်ကွေးသွားပီးတစ်ချီပီးသွားပါတော့တယ်။ကျုပ်က ချွေးမလေးနှုတ်ခမ်းတွေကို စုပ်လိုက်ပီး(သမီးကောင်းလား အဖေလုပ်ပေးတာ..ဟင်)(အဖေရယ်လိုးတတ်လိုက်တာဟင့်အရမ်းကောင်းတာပဲ..အဖေရောမပီးသေးဘူးလား) (ပီးသေးဘူးလေ..တမင်ထိမ်းထားတာအဟင်းနောက်တစ်ချီမှပီးလိုက်မယ်လေမကြိုက်ဘူးလားသမီး)(အဖေရယ်.စိတ်တိုင်းကြသာလိုးပါတော့ကြိုက်တယ်အဖေက အလိုးတော်တယ် ဟီး)( သမီးဆောက်ပါတ်က သိတ်လိုးလို့ကောင်းတာပဲကွယ် မျှော့ပါတော့အဖေ့လီးကိုညှစ်ထားတာ ဇိမ်ပဲကွာ)(ဖေရယ်..သမီးတော့ ဟိုလေ..ဖေ့ကို ချစ်တယ် )(အဖေကလည်း ငါ့သမီးလေးကိုလေ တိုးမောင်ခရီးမသွားခင်ညကအလိုးခံနေတာချောင်းကြည့်ပီး အရမ်းလိုးချင်နေတာ)(ဟယ်..အဖေ ဘယ်လိုချောင်းကြည့်လဲဟင်)(ဘုရားခန်းကြမ်းပြင်ကနေချောင်းတာအတိုင်းသားပဲကွယ်.အဟင်းသမီးတို့လိုးတာကိုကြည့်နေရင်းအဖေမနေနိုင်လို့ဂွင်းထုလိုက်ရတယ် ဟိုနေ့ကသမီးလျော်ဖို့ယူသွားတဲ့အဖေ့လုံချည်မှာ သုတ်ရေတွေပေနေတာသမီးတွေ့တယ်မဟုတ်လားဟီးဟီး) (သိတာပေါ့အဖေ့လရေတွေကိုတောင်နမ်းကြည့်လိုက်သေးတယ်.ဟိ)။ကျုပ်တို့တွေဆေးအစွမ်းကြောင့်မွှန်နေကြပါပီ။ချွေးမလေးကျုပ်ကိုသေခြာစိုက်ကြည့်လိုက်ရင်း(အဖေ..နောက်တစ်ချီလိုးကြရအောင်နော်..သမီးခံချင်လာပြန်ပီ အဖေ )(ဘယ်လိုပုံစံ နဲ့လိုးပေးရမလည်းပြော သမီး)( ဟီဟိ..အဖေ့ အပေါ်ကတက်ဆောင့်ချင်တယ်)ချွေးမလေးရဲ့ နှာထန်ချက်ကတော့ဗျာ.တစ်ညလုံး ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ အလိုးခံရင်း သူ့ပါးစပ်ကနေအော်ညီးတာက ဒီလိုဗျ။( ကောင်းလိုက်တဲ့ အဖေ့လီးကြီး..လိုး..နာနာဆောင့်လိုး အဖေ..အားဆောက်ပါတ်ထဲမှာ စိမ့်နေတာပဲ..အားရလိုက်တာအဖေရယ်..မညှာနဲ့ အဖေ..လိုးသာ လိုး..အာ ဟား အဖေရယ် ယားတယ်လို့ဟင့်ဖင်ပေါက်ကိုပဲကလိနေတာပဲအဖေကလည်း..အိုးနာတယ်ဘာလို့ဖင်ထဲလက်နဲ့ထိုးနေတာလဲ.. အာာမလုပ်ပါနဲ့အဖေရယ်..ဟင့်အင်းလုပ်နဲ့ဆိုအို..အဖေရယ်..သမီးဖင်ပေါက်ထဲကပါယားလာပီ.. အင်း..ဟုတ်တယ်ထိုးလိုက်အဖေဖင်ထဲကိုလက်ထိုးထဲ့လိုက်တော့.ထိုး.. ထိုး..လုပ်တတ်လိုက်တာ သမီးတစ်ခါမှ မခံစားဖူးဘူး ဟိ….)အဲ့ဒီညက ကျုပ်တို့ဝက်ဝက်ကွဲလိုးလိုက်ကြတာ မနက်၃နာရီကျော်မှ ပင်ပန်းပီးအိပ်ပျော်သွားကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ချွေးမလေးနဲ့ကျုပ်ဟာ နေ့တိုင်းလိုလို လိုးဖြစ်လိုက်ကြတာ သားဖြစ်သူပြန်လာမယ်လည်းဆိုရော..( သမီးရေ အဖေတို့ကိစ္စကို သားမသိပါစေနဲ့ကွယ်..တို့တွေ ရပ်တန်းကရပ် လိုက်ကြရင် ကောင်းမယ်.အဖေလည်းရွာပြန်ရတော့မယ်လေ)လို့လဲပြောရော ချွေးမလေးကဘာပြန်ပြောတယ်ထင်တုန်း..ဟင်းဟင်းဟင်း….။(သမီး သဘောအရဆိုရင်တော့ အခုလို အဖေနဲ့ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စကို အမှန်အတိုင်းပဲ မောင့်ကိုပြောပြမယ်အဖေ သမီး မညာချင်ဘူး)( ဘာဖြစ်လို့လဲ သမီးရယ် အဖေတို့ဖြစ်ကြတာ ဘယ်သူမှသိတာမှ မဟုတ်တာ ပီးတော့ သားက လက်ခံပါ့မလားကွယ်)( ရအောင်သမီးပြောမှာပေါ့အဖေ..မောင့်အကြောင်းသမီးသိတယ် ညာတာ မကြိုက်ဘူး ..ပီးတော့သမီးတို့ဖြစ်ကြတာ သမီးအမှားကြောင့် ဆေးတံခိုးကြောင့်လေ အဖေမှားတာမှ မဟုတ်တာ)။ညစာစားအပီး ဧည့်ခန်းမှာထိုင်ကြရင်းကျုပ်နဲ့ ချွေးမလေးတို့ စကားပြောနေကြတာပါ။( သားက ပြသနာရှာနေရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ သမီး)( မရှာစေရပါဘူးအဖေရယ် စိတ်ချသမီး မောင့်ကိုနားလည်အောင်သေခြာပြောပြမှာပါ သမီးမှာအကြောင်းရှိလို့ပါ..ကိစ္စကို သမီးတို့၃ယောက်လုံး စုံပီးမှပြောပြမယ်လေ..ခုလို မောင့်ကို အဖြစ်မှန်ဝန်ခံတာ အကြောင်းရှိတယ် အဖေ)(ဘာအကြောင်းများလည်း သမီး)( ဟို…လေ.သမီး အဖေ့ကို မခွဲနိုင်တော့ဘူး အဖေ သမီးတို့နဲ့အပီးနေလိုက်ပါ) ကျုပ်ရင်ထဲမှာ လှိုက်ကနဲကိုဖြစ်သွားရပါတယ်ဗျာ။(တစ်ကယ်လား သမီးလေးရယ်..)ကျုပ်စကားအဆုံးမှာချွေးမလေးဟာထိုင်နေရာကထလာပီး ကျုပ်အပေါ်ကို ကားယား တက်ခွ လိုက်ပီး ……(တစ်ကယ်ပေါ့အဖေရယ်….သမီးလေအဖေ့လိုးချက်တွေကိုစွဲနေပီအဖေသမီးမရှက်ပါဘူး.. အဖေလိုးတာခံပီး ပီးရတာ..သိတ်ကောင်းတယ် အဖေရာ..သိတ်လိုးတတ်တာပဲ.ဟင့်) ( အဖေလည်း သမီး ဆောက်ပါတ်ကိုသိတ်ကြိုက်တာပဲ ယက်လို့ကောင်းတယ်)( အဖေ နက်ဖန်မနက်ဆို မောင်ပြန်လာပီ ဒီည သမီးကို အားရအောင် လိုးပေးနော်အဖေ)(ဖေ့သမီးကသိတ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲကွယ်ကဲအဖေ့ရဲ့လက်ခလည်လေးကိုတံတွေးတွေစိုရွှဲ သွားအောင် စုပ်ပေးပါဦးကွယ့်)(ဟင်..ဘာလုပ်မလို့လဲ )(ကဲ ရော့စုပ်ပါ အဖေပြမှာပေါ့ သမီးကို အရသာအသစ်ပေးမလို့)ကျုပ်လက်ခလယ် ကို လီးစုပ်သလိုမျိုးစုပ်အပီးမှာတော့ ချွေးမလေးရဲ့ထမီကို လှန်တင်လိုက်ပီး ဖင်ပေါက်ကို လက်တစ်ဆစ်လောက်ဝင်အောင်ထိုးချလိုက်ပါတယ်။(အ..အဖေလည်း ဘာလုပ်တာလဲလို့ ဟင့်)ချွေးမလေးစကားပြန်မပြောနိုင်အောင်နှုတ်ခမ်းခြင်းစုပ်နမ်းလိုက်ပီး ဖင်ပေါက်ကိုအသေခြာ ကလိပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ကျုပ်ပေါင်ပေါ်က ချွေးမလေးဟာအတင်းဖက်ထားရင်း သူ့လျာကိုကျုပ်အာခေါင်ထဲအထိထိုးကလိပါတယ်။ကျုပ်လက်ခလည်ဟာလည်းချွေးမလေးဖင်ပေါက်ထဲ တဖြည်းဖြည်းတိုးဝင်နေပါပီ။(အား..အဖေရယ် လုပ်ပြန်ပီ ဒီဖင်ပေါက်ကိုပဲနှိုက်နေတာပဲ.အား..ဖေ့..လုပ်ပါနဲ့ ဆိုကွာ)( သမီးလေး..အဖေ သမီးဖင်ကို လိုးချင်တယ်ကွာ..နော်)(အာ သမီးကြောက်တယ်..ဟိုလေ..ပီးတော့…အရမ်းနာတယ်အဖေရဲ့)( ဟင်..သမီးကဖင်အလိုးခံဘူးတယ်ပေါ့)( အဖေ့သား အတင်းလိုးတာလေ နာလိုက်တာအဖေရယ် ဒစ်လေးဝင်ရုံပဲရှိသေးတယ် ပြန်ထုတ်ခိုင်းလိုက်ရတယ် အဖေရဲ့)(ဟုတ်လား ဒီကောင်မလုပ်တတ်လို့ပါ သမီးရယ် အဖေ မနာအောင်လိုးပေးမယ်လေ နော်)(ဟွန့် ဖအေရော သားရော ဒီဖင်ပဲလိုးချင်နေကြတယ် ဘာမှန်းလည်းမသိဘူး..ဖေ့သားဆို ရင်ခဏခဏဖင်လိုးဖို့ကြိုးစားတယ်အဖေရဲ့ ပီးတော့ပြောသေးတယ်ဖင်လိုးရတာ ဆောက်ပါတ်လိုးရတာထက်ကောင်းတယ်တဲ့)( ဟာ သူကဖင်လိုးဘူးတယ်တဲ့လား သမီး)(ဟုတ်တယ် အဖေရေသူ့အထက်အရာရှိလူကြီးက သူ့ကိုလိုးခိုင်းလို့ ဖင်လိုးဘူးတယ်တဲ့)(အဖေလည်းဖင်လိုးရတာသိတ်ကြိုက်တယ်သမီးရယ်အဖေမနာအောင်လိုးတတ်ပါတယ်..နော်နာရင်မလိုးတော့ဘူးလေ)(အဖေရော ဖင်လိုးဘူးလား)( လိုးဘူးတာပေါ့ သမီးရဲ့ကဲပါကွယ်သမီးကိုအဖေအရသာအသစ်ခံစားရအောင်လို့ပါ..နောက်မှ ဖင်လိုးပေးဦးအဖေလို့ မပြောနဲ့ ဟားဟား)ကျုပ်ဟာပြောရင်းနဲ့..လက်ခလည်ကိုချွေးမလေးဖင်ထဲမှာမွှေပေးလိုက်ပါတယ်။(အ..ရှီး..ဖေကလည်းနော် ဇွတ် )ချွေးမလေးကိုဖီလင်တွေတက်လာအောင် နို့တွေစို့ပေးလိုက် kissing ဆွဲလိုက်လုပ်ရင်းကနေဖင်ပေါက်ထဲကို လက်တစ်ချောင်းလုံးဝင်အောင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။(အားဖေရယ် အဟင့်… ဘယ်လိုကြီးမှန်း မသိဘူးသမီးကို လိုးပေးပါတော့ အဖေရယ်) (ဖင်ထဲနှိုက်တာ ခံလို့ကောင်းလား)(တစ်မျိုးကြီးပဲ အဖေ..အဖုတ်ထဲက ပိုယားလာတယ်အဖေရဲ့..လိုးပေးပါတော့ဆို..ဟင့် ဟင့်)ချွေးမလေးရှက်လို့ အမှန်အတိုင်းမပြောတာကျုပ်သိတယ် သူ့ဖင်ပေါက်ကြွက်သားတွေကလက်ချောင်းကိုညှစ်ပေးနေတယ်။ကျုပ်နည်းစနစ်ပြောင်းလိုက်တယ်။(ကဲ.သမီး လေးဘက်ထောက်ဖင်ကုန်းလိုက်)( အဖေ..ဆောက်ပါတ်ကို အရင်လိုးပေး သမီးယားနေပီလို့)(အေးပါ သမီးရယ်ဖင်အရင်ကုန်းလိုက် သမီးဖင်ပေါက်လေး အဖေယက်ချင်လို့)( ဟင့် အဖေသိတ်ကဲတာ ပဲ…)ကျုပ်အပေါ်က ချွေးမလေးဆင်းသွားတော့ ကျုပ်ဆီးစပ်မှာ သူ့ဆောက်ပါတ်ကအရေတွေရွှဲနေတာပဲဗျာ။(လှလိုက်တဲ့ ဖင်ကြီးသမီးရယ် ဖင်ကိုကောက်ပေး သမီး အဖေယက်တော့မယ်နော်)ချွေးမလေးဟာ ကျုပ်အကြိုက်ဖင်ကိုနောက်သို့ကောက်ပေးလိုက်တော့ တံတွေးတွေစိုနေတဲ့ဖင်ပေါက်စူတူတူလေးကပြူထွက်လာတာမို့ လျာအပြားလိုက်ယက်တင်လိုက်ပါတယ်။(အားလား အဖေရယ်..ဟင့်..ယားတယ်လို့.အဖုတ်လဲယက်ပေးနော် အဖေ..အီး.ဟား..ဖင်ပါယားလာပီ အဖေရယ်..အိုး..ယက် အဖေယက် ဟုတ်တယ်..အား..ထိုးအဖေ ဖင်ထဲထိဝင်သွားအောင်ထိုး..အာဟား..ကောင်းတယ်အဖေ သမီးဖင်ထဲက ယားပီးကောင်းလာပီ..လုပ်တတ်တာအဖေရာ..အောင်မလေးနော်)(ကောင်းလားသမီး ဖင်ထဲထိုးပေးတာ)(သိတ်ကောင်းတာပဲအဖေရယ်ခုမှသမီးခံဘူးတယ်..အီး..ဟင့်အဖေရယ်လက်နှစ်ချောင်းပူးကြီးသွင်းလိုက်တာလားလို့)(ဒါပေါ့ သမီးရဲ့ ဖင်ပေါက်ချဲ့ပေးတာလေ အဖေ့လီးနဲ့လိုးရင် မနာအောင်လို့)( အဖေ့သားက..ဒီလိုမလုပ်ပဲ ဇွတ်ထိုးလုပ်လို့နာတာနေမှာ..အားလားလား ကောင်းလှချီလား အဖေရယ် ဖင်ထဲမှာယားနေတာပဲလို့)(ဒါတောင်လက်နဲ့ပဲရှိသေးတယ်သမီးရဲ့အဖေ့လီးနဲ့ဆိုသမီးလေးနိဗာန်ရောက်သလိုခံစားရမယ်)(ဟင့် ဒါဆိုလည်း လိုးတော့လေ အဖေ သမီးခံကြည့်ချင်ပီ အဖေရဲ့)(ကဲ..ပက်လက်လှန်လိုက်သမီး အဖေဖင်လိုးတော့မယ်..အဖေ့လီး သမီးဖင်ထဲဝင်တာကိုသမီးခံစားရတဲ့ မျက်နှာလေး အဖေကြည့်ပီးအရသာခံချင်လို့)(အဲ့တာကြောင့် အဖေ့ကို သမီးချစ်တာသိလား.ဟင့် ဖြည်းဖြည်းလိုးနော် ဖေ)။ ချွေးမလေးဖင်ဝကို ဂျယ်ရီရွှဲနေအောင်သုတ်လိုက်ပီးလီးဒစ်ကိုမေးတင်ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ချွေးမလေးဟာ ကော့ပေးရင်း( မနာအောင် လိုးပေးနော် အဖေ)တဲ့။( စိတ်လျော့ထား သမီး ဖင်ပေါက်ကိုလဲဖွင့်ထား အဖေ လိုးပီနော်)။ချွေးမလေးဖင်ပေါက်ဟာထင်ထားတာထက်စည်းပိုင်နေပီးဒစ်စအ၀င်မှာပဲဖင်ဝကြွက်သားတွေက ဒစ်ကိုကြိုဆိုလိုက်ကြပါတယ်။(အ..နာတယ် အဖေ..အား သေပီ..နာတယ် တော်ပီမလိုးနဲ့တော့အား)ကျုပ်ဟာဆက်မသွင်းတော့ပဲ ကွမ်းသီးခေါင်းဖင်ပေါက်ထဲအ၀င်မှာပဲ အသာငြိမ်နေလိုက်ပီးချွေးမလေးရဲ့ဆောက်ပါတ်ကိုနှိုက်ပီးကလိတာရော နို့စို့တာပါ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ခဏနေတော့ ချွေးမလေးအောက်ကနေပြန်ကော့ပေးနေပါပီ။( နာသေးလား သမီးလေး)(သိတ်မနာတော့ဘူး အဖေ..နဲနဲသွင်းကြည့်ပါလား)ကျုပ်ဟာလီးကို မသွင်းသေးပဲခါးကိုဝေ့၀ိုက်ပီး မွှေပေးလိုက်ပါတယ်။(အာ..ဖေ့..သွင်းပါဆို..ရပီ သမီးခံနိုင်ပီ အဖေ လိုးတော့ အရမ်းယားနေပီလို့)ကျုပ်ဟာ လီးကိုတစ်ထစ်ချင်းထိုးသွင်းပေးရင်း ဆောက်စိကို ဖိချေလိုက်ပါတယ်။(အားယား.လုပ်အဖေ ကောင်းတယ်..အိုး ရက်စက်လှချီလား အဖေရယ် ကောင်းလိုက်တာ..)(သမီးဖင်ပေါက်လေးက လိုးလို့ကောင်းလိုက်တာကွယ်.ကြပ်ထုပ်နေတာပဲ သမီးလေးရာ)(အာား..အဖေရေ ဖင်ထဲကရော ဆောက်ပါတ်ထဲကပါ ကောင်းလာပီ..လိုးအဖေ..ဆောင့်လိုးအ.ဟ..ဟုတ်တယ် ဖင်လိုးရင်း အဖုတ်ပါနှိုက်ပေးတာမိုက်တယ်အဖေ..သမီး ပီးချင်လာပီ.ဟိအိ..အိ..ဖေ့..လီးကိုတစ်ဆုံးလိုးလိုက်တော့..အား ပီးပီ..အဖေ..ရေ..ထွက်ပီတော့..အား..ယား)ချွေးမလေးကျုပ်ကိုတစ်အားဖက်ထားရင်း သူ့ဖင်ကိုဇကောဝိုင်း ၀ိုင်းပေးကာ ဆောက်ပါတ်ထဲကအရေတွေပန်းထွက်ပီးတစ်ချီပီးသွားရှာပါပီ။ ချွေးမလေးပါးနားကိုကပ်ပီးကျုပ်မေးလိုက်တယ်(သမီး အဖေ ဖင်လိုးပေးတာ ကောင်းလားဟင်)နွမ်းလျတဲ့လေသံလေးနဲ့ပြန်ဖြေရှာတယ်(အရမ်းကောင်းတာပဲအဖေရယ်သမီးလူဖြစ်ရကျိုးနပ်ပီ..ဖေရောကောင်းလား.ပီးသေးဘူးလားလို့)(အဖေ ဖင်လိုးခဲ့ဘူးသမျှတွေထဲမှာ သမီးက ဖင်ပါကင်မို့ အရမ်းလိုးလို့ကောင်းတယ် သိလား..အဖေ မပီးသေးဘူး သမီးဆောက်ပါတ်ကိုလိုးချင်သေးတယ်..ဒီညတော့ ဖင်ရော ဆောက်ပါတ်ပါ တစ်လှည့်စီ လိုးပေးမယ်နော်..အဖေပီးရင်တော့ သမီးဖင်ထဲမှာပဲ ပီးလိုက်မယ်နော် သမီး..)(ဖေ့စိတ်ကြိုက်သာလုပ် အဖေလုပ်တာအကုန်ကောင်းတယ်..ခုတောင် သမီး မ၀သေးဘူးဟိ)(ဖင် အလိုးခံတဲ့သူတွေက သူတို့ဖင်ကိုလိုးနေရင်း ရှေ့ကပီးရတာဘယ်အရသာနဲ့မှမတူဘူးတဲ့)(ဟုတ်တယ် အဖေသူတို့ပြောတာမှန်တယ်..အဖေဘယ်သူတွေကို ဖင်လိုးခဲ့ဘူးတာလဲ ဟင်)(အဖေတို့မြို့က ဆရာဝန်ကြီးကို အရင်ဦးဆုံးလိုးဘူးတာ သူလည်းအဖေလိုးနေရင်းနဲ့ ဂွင်းမထုရဘဲနဲ့ကို လရေတွေပန်းထွက်ကုန်တာ.သူရှင်းပြမှဖင်ခံတဲ့အရသာကိုအဖေသိလာတာ..နောက်အဖေဖင်လိုးဘူးတဲ့သူတွေလည်း အတူတူပဲ)(အဖေရော ဖင်အလိုးခံဘူးလား)( မခံဘူးပါဘူး)(ကဲ ဖေ့..သမီးဆောက်ပါတ်ကို လိုးမယ်ဆို..ဟင့် မလိုးခင် ယက်ပေးဦးနော်..ဟီး အဖေ သမီး ဖင်ပေါက်ကို ယက်ပေးတာသိတ်ကောင်းတာပဲ အဖေရယ်..ယားတက်လာပီး ဖင်အလိုးခံချင်စိတ်ကိုတန်းပေါ်လာတာပဲ..ဟင်း အဖေကဆရာကြီးပဲ ဖင်လည်းမနာအောင်လိုးတတ်တယ်)ကျုပ်ဟာတစ်ညလုံးပဲ ချွေးမလေးကို ဆောက်ပါတ်လိုးလိုက် ဖင်လိုးလိုက်နဲ့ မိုးအလင်းပါပဲ။သားဖြစ်သူ တိုးမောင်ကို ညနေ ၅ နာရီမှာ သွားကြိုခဲ့ပီး ချွေးမလေးကိုပါ ဈေးမှာတစ်ခါတည်းဝင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ရောက်တာနဲ့ ကျုပ်ဟာ တိုးမောင်ကို ကျုပ်နဲ့ ချွေးမလေးကိစ္စအသေးစိတ်ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ချွေးမလေးကတော့ ခေါင်းငုံ့ပီးသာနေပါတော့တယ်။ကျုပ်စကားလည်းဆုံးရော တိုးမောင်က ချွေးမလေးကိုလှမ်းကြည့်ပါတယ်။(ဟုတ်တယ် ဖေဖေပြောတာတွေအကုန်မှန်တယ်အဲ့ဒီ ကော်ဖီမစ် ကြောင့်ဖြစ်သွားကြတာ) ဆိုတော့ တိုးမောင်က..( သားလုံးဝ မယုံဘူး ဖေဖေ )( ဘာကိုမယုံတာလဲ သား)(အဲ့ဒီ COFFEE MIX က ဒီလောက်ထိအောင် လိင်စိတ်ကိုနှိုးဆွနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပေါ့ အဖေနဲ့ အေးဖြစ်တာကို သားခွင့်လွှတ်ဖို့ဆိုတာထက် အဲ့ဒီ ဆေးကို သားကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ စမ်းကြည့်ပီးမှ ယုံမယ် ဖေဖေ ခု အဲ့ဒီ COFFEE MIX ရှိလား)( ရှိတယ်သား ဖေ့ သူငယ်ချင်းက ငါးထုပ်ပေးထားတာ ဘာလုပ်မလို့လဲ)( သားသောက်ကြည့်မယ် ပီးတော့ ဖေရော အေးပါ သောက်ရမယ်)( ဟို..မောင်..ဒီဆေးက…)(မိန်းမ ဘာမှဝင်မပြောနဲ့ မောင့်အကြောင်းသိတယ်နော်လက်တွေ့သမားဆိုတာ.ကဲပေး အဖေ)ကျုပ်က ချွေးမလေးကိုဘာမှဝင်မပြောဖို့မျက်ရိပ်ပြပီး ဆေးကိုပေးလိုက်ပါတယ်။တိုးမောင် ရောကျုပ်ရော ချွေးမလေးတို့ပါ ပြိုင်တူသောက်လိုက်ကြပါတယ်။( သား..ဆေးက နာရီဝက်လောက်နေရင် အစွမ်းပြလိမ့်မယ်သားကခရီးကပြန်လာတော့ နွမ်းနေလိမ့်မယ် ရေမိုးချိုးလိုက်ဦးခဏနေအဖေတို့ ဧည့်ခန်းမှာပြန်ဆုံရအောင် ပီးတော့ တစ်ခွက်တစ်ဖလားချရအောင်ကွာအဖေလည်းမသောက်ရတာကြာပီမကောင်းဘူးလားသမီးက အမြည်းလုပ်ကွာ)။ကဲ ကျုပ်တော့ မီးစင်ကြည့်၍ ကရတော့မည်။ ဆက်လက် သာရှု့စားကြပါကုန်။ …။ နောက်နာရီဝက် အကြာမှာတော့ကျုပ်တို့သုံးယောက်ဟာ ဧည့်ခန်းဆိုဖာခုံရှည်မှာ တန်းစီထိုင်လိုက်ကြရင်း(ကဲချီးယားစ်သားရေအဖေတို့ကိစ္စကိုနားလည်နိုင်ပါစေလို့အဖေဆုတောင်းပါတယ်..ဟင်..သမီးကရော မသောက် ဘူးလားကွ..လုပ်ပါ ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့ တစ်ခွက်လောက်တော့ အားပေးလေ သမီး ရဲ့)( ဟုတ်သားပဲ အေး ကလည်း အရင်ကလည်း သောက်ဘူးတာပဲဥစ္စာ ကဲ ထည့် တစ်ခွက် )တိုးမောင်ကို ကြည့်ရတာ ကျုပ်တို့ကိစ္စကို သိတ်အလေးမထားသလိုထင်နေမိတယ်။တိုးမောင်က ကျုပ်သားအရင်းမဟုတ်ပေမယ့်လိင်စိတ်ထန်တာက သူ့အမေနဲ့တူတာဗျ။သူ့အမေကို ကျုပ်ယူကတည်းက တိုးမောင်ကိုယ်ဝန်က ၂ လနဲ့ပါလာတာလေ။စေ့စပ်ပီးကာမှ ကားမှောက်လို့ဆုံးသွားတဲ့ ကျုပ်သူငယ်ချင်းရဲ့ ရည်းစားကို ကျုပ်က အရှက်မကွဲအောင် ကယ်တင်ရှင်လုပ်လိုက်ရတာပေါ့။ထားပါ ဒီကိစ္စ တိုးမောင်ကလည်း ကျုပ်ကိုအဖေ အရင်းမဟုတ်မှန်းသိပေမယ့် ဘယ်သူ့မှ မပြောရှာပါဘူး။ ချွေးမလေးကတော့လုံးဝမသိရှာပါ…။( မိန်းမ အမြည်းတွေက စုံလှချီလားကွ)(အဖေ့သားက သောက်တာနဲနဲစားတာများများ ဟွန်း)ကျုပ်ထင်တယ် ကျုပ်တို့တွေဟာ စကားသာပြောနေကြတယ် အသက်မပါသလိုပဲ။ အရက်တစ်ခွက် အကုန်မှာတော့ တိုးမောင် ဆီက…(အင်း မသောက်တာကြာလို့လားမသိဘူး ရှိန်းတိန်းဖိန်းတိန်းနဲ့ မိတ်ကိုက်သလိုပဲ မိန်းမရေ )ချွေးမလေးကျုပ်ကိုလှမ်းကြည့်ပါတယ်။တိုးမောင်ဆေးတံခိုးပြချေပီ။ကျုပ်နဲ့ ချွေးမလေးကတော့စိတ်ထိမ်းထားလို့ထင်ရဲ့မထူးခြားသေး။တိုးမောင် ဆေးတံခိုးပြနေပီဆိုတော့ ကျုပ်စဉ်းစားတာမီးလောင်ရာလေပင့် လုပ်ဖို့ပါပဲ။မထူးတော့ဘူးလေ..အရသာရှိရှိ ရင်ဆိုင်လိုက်မှာပေါ့…။(ကဲ တီဗီသတင်းကြည့်ရတာပျင်းစရာကြီးကွာ ဗီဒီယိုကြည့်ရအောင်မကောင်းဘူးလား)(ကောင်းတာပေါ့အဖေ..ဟဲဟဲ ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ဟိုကားလေးဘာလေး မကြည့်ချင် ဘူးလား အဖေဟီဟိ)တိုးမောင် ကျုပ်ခွင်ထဲဝင်လာပီ။(အာ..မောင်ကလဲ အဖေ့ကို)ချွေးမလေးဝင်ဟန့်သော်လည်းအသံကရွှင်ပြနေပီ။(ဘာဖြစ်လဲ မိန်းမရဲ့ ပိုတောင်ကောင်းသေးဟုတ်ဘူးလား အဖေ)(ဟုတ်ပါ့ကွာ အတော်ပဲ အဖေ့သူငယ်ချင်းပေးထားတဲ့ အခွေ မကြည့်ရသေးဘူးကွ အဟင်း)။ အခွေကို အပေါ်ထပ်တက်ယူပီးဆင်းလာတော့ တိုးမောင်က ချွေးမလေးထမီအောက်ကနေ နှိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ကျုပ်ကိုမြင်မှလက်ပြန်ရုတ်လိုက်ပါတယ်။ချွေးမလေးကကျုပ်ကို မျက်စိမှိတ်ပြပါတယ်။ ဇာတ်ကားကတော့ အမေရိကန်ကားပါပဲ။ ဇတ်ကောင်တွေကို စာတန်းထိုးမိတ်ဆက်ရာမှာ မိန်းမကိုဖင်လိုးတဲ့ အခန်းပါလာတာမို့ ကျုပ်နဲ့ ချွေးမလေးတို့ အကြည့်ချင်းဆုံကြပြန်ပါတယ်။တိုးမောင်ကတော့(ဟား အဖေ့ခွေကတော့… ရှယ်ပဲ)တဲ့။ဇတ်လမ်းအစမှာပဲ မီးဖိုချောင်ထဲချက်ပြုတ်နေတဲ့ မိန်းမကို ယောက်ကျားဖြစ်သူကနောက်ကနေ သိုင်းဖက်ရင်း ည၀တ်အကျီကိုချွတ်ချပီး လီးတောင်တောင်ကြီးနဲ့ မိန်းမဖင်ကိုထောက်လိုက်ပါတယ်။ခဏနေတော့ အောက်ကိုထိုင်ချလိုက်ပီး ဆောက်ပါတ်ကိုယက်ပါတော့တယ်။ကျုပ်တော့ ဆေးတံခိုးပြပီဗျာ။အပြာကားတို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း လီးစုပ် အဖုတ်ယက်ပီး လိုးကြတော့မယ်ပေါ့။ခုဟာက အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျ။နှစ်ယောက် 69 ဆွဲနေကြရင်း ယောက်ကျားဖြစ်သူက မိန်းမဖင်ပေါက်ကိုဖြဲပီးယက်ပီလေ။ ကောင်းလိုက်တဲ့ပြကွက်။(ဟာ..)နောက်ပြကွက်ကြောင့် တိုးမောင်ပါးစပ်ကအသံထွက်သွားပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျာ လီးစုပ်နေတဲ့ မိန်းမက ဂွေးဥတွေပါ စုပ်ရင်း ယောက်ကျားရဲ့ဖင်ပေါက်ကိုယက်ပီ။ယောက်ကျားဖြစ်သူ ကော့တက်သွားတာများကိုယ်တိုင်ခံစားနေရသလိုပဲဗျ။ရှားပါးတဲ့အောကားလို့ပြောရမယ်။ကြည့်ပါဦးဖင်အယက်ခံနေတဲ့ယောက်ကျားကလေးဘက်ထောက်ကုန်းပေးလိုက်ပြန်တယ်။ဖင်ကိုဖြဲပီး ယက်ပေးနေတာများဗျာ။ဘေးကိုကြည့်လိုက်တော့ တိုးမောင်လီးကို ချွေးမလေးက လုံချည်အပေါ်ကနေကိုင်ပေးနေပီ။ကျုပ်လည်းပေါင်ကားလိုက်ပီးတောင်နေတဲ့လီးကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်။မိန်းမလုပ်သူက ဖင်ပေါက်ယက်နေရင်းက လက်ညှိုးနဲ့ထိုးပေးနေပြန်ပါပီ။တော်တော်ကောင်းတဲ့ကားပဲဗျာ။ကျုပ်လီးကအရေကြည်စို့လာပီ။ပိုဆိုးတာကဆေးတံခိုးပြလာတာပါပဲ။(အာ..အဖေရှိတယ်..မောင် နော်ဟွန်း)ချွေးမလေးအသံထွက်လာလို့ကြည့်လိုက်တော့တိုးမောင်က ချွေးမလေးထမီကို လှန်တင်ပီး ဆောက်ဖုတ်နှိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကိုး။(သား.စိတ်တွေဘယ်လို ခံစားရလဲ)(ဟို..အဟီး တစ်မျိုးကြီးဖြစ်လာတယ်အဖေ)(ဒါ အစပဲရှိသေးတယ်သားသိလာလိမ့်မယ်..အဟင်း နေပါ လွတ်လွတ်လပ်လပ်..အဖေ့ကိုမရှက်ပါနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့သားရာ ဟားဟား)(အာ..အဖေကလည်း ဖေ့သားက ဇွတ်ကြီးဟာကို)(သူ့ကိုမထိမ်းချုပ်ပါနဲ့သမီးရယ်ဒါမှဒီဆေးအကြောင်းသိမှာ..ကဲအဖေရှူပေါက်လိုက်ဦးမယ်)။ ကျုပ်တစ်ကယ်သေးပေါက်တာမဟုတ်ပဲ မီးဖိုခန်း တံခါးကြားကနေသူတို့ကို ချောင်းကြည့်လိုက် ပါတယ်။ကျုပ်သွားတာနဲ့တိုးမောင်ဟာ ချွေးမလေးထမီလှန်ပီးခေါင်းထိုးထည့်တော့တာပါပဲ။(ဟင့် မောင်ကလည်း ဇွတ်ပဲကွာ အား.ဟား..မောင်ရယ်..တော်တော့ကွာ အဖေပြန်လာတော့မယ် မကောင်းဘူးဆို)( အေးရယ် မောင်အရမ်း လိုးချင်နေပီကွာ..)။ချွေးမလေးခမြာမှာဖီလင်တွေတက်ပီးမှိန်းနေရာကျုပ်ပြန်ဝင်လာတာကိုပင်မသိ။ (ဟ..သမီးတို့က စ.နေကြပီလား..ဟားဟား..)ရှက်နေကြတဲ့ သူတို့တွေကို နေသာအောင်လို့( ကဲ..နေပါ လုပ်ပါ မရှက်ပါနဲ့ ကိုယ့်အဖေပဲ..ဆော်ချင်ရင်..ဆော်သာဆော်… )ကျုပ်တို့ သုံးယောက်ဆေးအစွမ်းနောက်လိုက်ကြရတော့မှာ အသေအခြာပါပဲ။( မောင်က လဲဟင့်..လာကွာ အခန်းထဲသွားရအောင်)( အာ..မသွားပါဘူး မိန်းမရာ အဖေ့ရှေ့မှာပဲ လုပ်ချင်တယ်)( ဟုတ်သားပဲ သမီးရယ် မရှက်ပါနဲ့ လုပ်ကြ အဖေကြည့်ချင်လို့.ပါ.ဒီရောက်ခါစကတော့ မင်းတို့လင်မယား လိုးတာကို ချောင်းပဲကြည့်ရတာ..ဟာ..ဟ)။ချွေးမလေးဟာ…ဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲကျုပ်ကိုသေခြာစိုက်ကြည့်ကာအ၀တ်အစားတွေချွတ်ချလိုက်ပါတယ်။တိုးမောင်ပုဆိုးကိုလည်းဆွဲချွတ်လိုက်ပီးလီးကိုသေခြာဂွင်းတိုက်ပေးနေပါတယ်။ပီးတော့ ကုန်းစုပ်လိုက်ပါတော့တယ်။ တိုးမောင်က ကျုပ်ကိုကြည့်ရင်း(အဖေ..သားနားလည်ပါပီ အဖေတို့ကိုသား ခွင့်လွှတ်ပါတယ်..ခုသားစိတ်ထဲမှာ အရမ်းကိုဖြစ်ချင်နေပီ အဖေ)ကျုပ်လည်းဖီလင်တက်နေပီမို့ချွေးမလေးလီးစုပ်နေတာကိုတိုးမောင်ဘေးနားကပ်ထိုင်ပီးကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။လီးစုပ်နေရင်းနဲ့ကျုပ်ကိုမော့ကြည့်နေတဲ့ချွေးမလေးကိုကျုပ်သိတ်ချစ်သွားပီ လေ။ကျုပ်လည်းမတ်တပ်ရပ်လိုက်ပီး ပုဆိုးကိုကွင်းလုံးချွတ်ချလိုက်ပါတယ်။( ဟာ..ဖေ့ပစ္စည်းက နဲတာကြီးဟုတ်ဘူး.ဒါကြီးနဲ့ ဖေ့ ချွေးမလေး ကိုလိုးတယ်ပေါ့..အေး ဒီမှာကြည့်ပါဦး ဖေ့ လီးကြီးကို..ဟားဟား..)တိုးမောင်တို့ မွှန်ချေပီ။လီးစုပ်နေတဲ့ ချွေးမလေးခေါင်းကို ကျုပ်အသာလေးပွတ်ပေးနေတော့…တိုးမောင်က ဘာပြောတယ်ထင်တုန်း ဒီကောင်အတော့် ကိုမှုန်ယိုနေပီပဲ( အဖေ..အေးကို သားရှေ့မှာ လိုးပြပါလား အဖေရယ် နော်)( အိုကွာ..သားကလည်း..သားလေး ဆေးအစွမ်းကိုသိပီးပီဆိုတော့ တော်လောက်ပီလေကွယ် သားတို့လင်မယားပဲလုပ်ကြလေ အဖေကြည့်နေမယ် )( ဟင့်အင်း အဖေ..သားအရမ်းဖီးတက်နေပီ အဖေနဲ့ အေးလိုးတာ အရမ်းကြည့်ချင်တယ်.ဖေ့လီးကြီးနဲ့ အေးဘယ်လို အလိုးခံလဲဆိုတာ ကြည့်ချင်တယ် အဖေရယ် လုပ်ပါဗျာ..နော်)( မောင်ကလည်းကွာ ဟင့်ဘာမှန်းလည်းမသိဘူး)ပြောသာပြောနေတယ် ချွေးမလေးမျက်နှာက ပြုံးနေတယ်။( အေး..အဖေ့လီးကို စုပ်ပေးလိုက်လေ)ချွေးမလေးကျုပ်ရှေ့မှာဒူးထောက်လိုက်ပီးကျုပ်လီးဒစ်ကိုငုံလိုက်ပါတယ်။ချွေးမလေးဟာကျုပ်ကိုမော့ကြည့်လိုက် လီးစုပ်လိုက်နဲ့ပျော်နေလေပီ။(တော်ပီ သမီး..ဟိုမှာထိုင်ပီး ပေါင်ကားထားစမ်း အဖေ သမီးဆောက်ပါတ်ကို ယက်ချင်တယ်)( ဟင့် ဖေကလည်း..)(သား အဖေ မင်းမိန်းမ ဆောက်ပါတ်ကို ယက်ပေးလိုက်မယ်နော်..အဖေက မလိုးခင် ယက်ရမှ အားရတာ သားရဲ့)(ဟား..မိုက်တယ် အဖေရာ ယက်..ယက်..သားလည်း အဖုတ်ယက်ပီးမှ လိုးတာ ဟီး)။ကျုပ်တို့၂ယောက်ကိုတိုးမောင်ဟာထိုင်ခုံပေါ်ကနေဇိမ်နဲ့ကြည့်ရင်းဂွင်းထုနေပါတယ်။တိုးမောင်ရဲ့ တံတွေးတွေနဲ့ စိုရွှဲနေတဲ့ ချွေးမလေးဆောက်ပါတ်ဟာ နီရဲပီးပြဲနေပါတယ်။ ချွေးမလေးဟာ ကျုပ်အကြိုက် သူ့ဆောက်ပါတ်ကိုဖြဲပြရင်း( အီး..သမီးတစ်အား ယားနေပီ အဖေရယ်..)ကျုပ်လျာဇောင်း အစွမ်းကြောင့် ချွေးမလေးလူးလွန့်နေပါပီ….။(အား ကောင်းတယ် အဖေရယ်..ယက်..အစိကိုစုပ် ပေး အားသမီးယားလာပီအဖေရေ..) (သား တိုးမောင်)(ဗျာ အဖေ )( မင်းမိန်းမကို မင်းလီးစုပ်ခိုင်းလိုက်လေကွာ ညံ့ပါ့)ကျုပ် ချွေးမလေးမှာ ကျုပ်ဆောက်ပါတ်ယက်တာကို ခံရင်း သူ့ယောက်ကျားလီးကိုစုပ်ပေးပီးဘ၀င်တွေခွေ့နေပါတယ်..။( မိန်းမ အဖေမှုတ်ပေးတာ ကောင်းလား)(အရမ်းကောင်းတယ် မောင်..အေး အလိုးခံချင်လာပီ..အဖေ..တော်ပါတော့ သမီးကိုလိုးပါတော့အဖေရယ် အီးဟီး..အ.အ)(ကဲ လာသမီး အဖေ့ လီးပေါ်တက်ထိုင်..သား..အဖေ့လီးကို မင်းမိန်မ ဆောက်ပါတ် အ၀ကိုချိန်ပေးလိုက်)( အဖေရယ်..မိုက်တယ်ဗျာ သားကြိုက်တယ်)။တိုးမောင်ဟာ ကျုပ်လီးကိုသေခြာကိုင်ရင်း ဆောက်ပါတ်အ၀နဲ့ ချိန်ပေးနေပါတယ်။ ( ရပီ မိန်းမ ထိုင်ချလိုက်တော့..အိုးကေး)(ဟာ ဖေ့ လီးကြီး ဆောက်ပါတ်ထဲဝင်သွားပီ..အေး..လီးဝင်တာ ကောင်းလား ခံလို့ ဟင်)( အရမ်းကောင်းတာပဲ အား..ဟဟ..မောင်ရယ်..အဖေ့လီးနဲ့ အလိုးခံရတာသိတ်ကောင်းတာ)တက်ဆောင့်ရင်း အရှိန်ရလာတဲ့ ချွေးမလေးဟာ( ကောင်းလိုက်တာ အဖေ ရယ်ဖေ့လီးနဲ့ အလိုးခံရတဲ့ အရသာက ဘာနဲ့မှကို မတူဘူး မောင်ရဲ့ အောင်မလေး ဆောက်ပါတ်ထဲရော..ဖင်ထဲမှာရော အို..တစ်ကိုယ်လုံးကို စိမ့်ပီး ကောင်းနေပီ မောင် ရဲ့ )လို့အော်ဟစ်ခါကျုပ်အပေါ်မှာမြင်းစီးနေသလို ဆောင့်လိုးနေပါတယ်။တိုးမောင်ကတော့ အရူးတစ်ယောက်လိုကျုပ်တို့လိုးနေတာကိုကြည့်ပီးပျော်နေပါတယ်။( သား တိုးမောင် ဒီတိုင်းကြည့်မနေနဲ့လေကွာမင်းမိန်းမကို နို့စို့ပေးလိုက်)(ဟားး မောင်ရယ်..စို့စို့ ကောင်းလိုက်တာ ကြမ်းကြမ်းလေး စို့ လေအ..ဟ ဟုတ်တယ်..ဟင့် မောင်ရယ်..)ချွေးမလေးကအားနဲ့ဆောင့်လိုက်ရာလီးက ကျွတ်ထွက်သွားပါတယ်။(အ..ဖေ့..ဟင့် ကျွတ်သွားပီလို့ )(ထိန်းပီးလိုးလေ သမီးကလည်း..သားရေ အဖေ့လီးပြန်သွင်းပေးပါဦးကွာ)။တိုးမောင်ဟာဆောက်ရေတွေရွှဲနေတဲ့ကျုပ်လီးကိုဂွင်းတစ်ချက်ထုလိုက်ပီးဆောက်ပါတ်အ၀ကို ပြန်တေ့ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပီးတော့ချွေးမလေး ဖင်ဆုံကြီးကို ကိုင်ပီး ကျုပ်လီးပေါ်ကို ဆောင့်ချ လိုက် ပြန်ဆွဲတင်လိုက်နဲ့ ကျုပ်တို့လိုးပွဲကို ၀င်ကူညီပေးနေပါတယ်။(သား လိုးချင်ပီလား)(ဟင့်အင်း အဖေ အေးကို ပီးအောင် လိုးတာ ကြည့်မယ်..အဖေ.. အေးကိုလိုးရတာ ကောင်းလားဟင် )( ကောင်းတာပေါ့ သားရယ် သမီးဆောက်ပါတ်က စုပ်အားအရမ်းကောင်းတာသားရဲ့ စီးပိုင်နေတာ)။နောက်တစ်ခါ ချွေးမလေးကအရှိန်များသွားတာမို့ လီးကကျွတ်သွားပြန်ပါတယ်။(အား..မောလိုက်တာ အဖေရယ်)လီးကိုပြန်မသွင်းသေးပဲ ချွေးမလေးက ကျုပ်ရင်ဘတ်ပေါ်မှာမှိန်းနေပါတယ်။တိုးမောင်ဟာ ကျုပ်လိုးထားလို့ပြဲအာနေတဲ့ ချွေးမလေးဆောက်ပါတ်ကို နောက်ကနေ ကုန်း ယက် လိုက် ပါတယ်။(အ..ဟင့် မောင် ရယ်..သိတ်ကဲတာပဲ)(ဘာဖြစ်တာလဲ သမီး)(ဟင့် ဖေ့ သားပေါ့ သမီးဆောက်ပါတ်ကို ယက်နေတာအား..မောင်ရယ် ကောင်းလိုက်တာ အဟင့်)( မောင်း..ဟင့် ယက်ပေးဦးလို့)တိုးမောင်တစ်ယောက် သူ့မိန်းမဆောက်ပါတ်ကိုယက်ပီး နှာတွေထနေပီ ဆေးတံခိုးပေါ့ဗျာ။ ( ဖေ့ သမီးညောင်းလာပီလို့..ဟင့်)( ဒါဆို လေးဘက်ကုန်းလိုက် သမီး ဖေနောက်က လိုးပေးမယ်)( ကဲ အဖေလိုးပီ သမီးခါးလေးကို ခွက်ထားလေ..အေး ဟုတ်တယ် အဖေသွင်းပီနော်..)(ဟုတ် ဖေ)ချွေးမလေးဆောက်ပါတ်ဟာ အရည်တွေနဲ့ရွှဲအိနေတာမို့..ကျုပ်လီးဟာ လျောကနဲဝင်သွားပါတယ်။ချွေးမလေးခါးဟာ..တွန့်ကနဲတစ်ချက်ဖြစ်သွားပီးငြိမ်သွားပါတယ်..။လီးအဆုံးထိအောင်ဝင်သွားတာနဲ့ ကျုပ်ဟာ ခါးကိုနွဲ့ရင်း လီးကိုမွှေလိုး လိုးပေးလိုက်ပါတယ်။(..အ..အာ..လား..အဖေး..လုပ်တတ်လိုက်တာ..နော်..အ..ဟအ…အီး…အင့်..ဟင့်..)ကျုပ် ချွေးမလေးကိုဆောင့်လိုးတဲ့အားက ပြင်းလာပီ( အိ..အိ..အားဟုတ်တယ် ဖေ့ အဲ့လိုဆောင့်..ကောင်းတယ်.အ..အ..အ အဖေရယ် လိုးတတ်လိုက်တာနော်)ကျုပ်တို့လိုးနေတာကို ဘေးကကြည့်နေရင်းသားဟာ ချွေးမလေးဖင်ပေါက်ဝ လေး ကို ပွတ် လိုက်ပါတယ်။( အား..အဖေ..လုပ်ပြန်ပီ..ဟင့်)( အဖေလုပ်တာ မဟုတ်ဘူး သမီးရဲ့ အဖေ့သား နင့်ယောက်ကျား လုပ်နေတာ ဟား ဟား )(အယ်..မောင်နော်..အ..မလုပ်ပါနဲ့ ဟင့်)( အေး ဖင်ပေါက်လေး မောင်ယက်ပေးမယ်နော်)(အာ..ဟားး.မောင်ရယ်အီး.အ.အ..ဟင့်..ယားတယ် မောင်ရဲ့ အိုး)( အေး ဖင်ကို မောင်လိုးချင်တယ်ကွာ နော်)( ဟိ..မောင် နောက်ကျသွားပီ..အေးဖင်ကို အဖေလိုးပီးပီ ဟင့်)( ဟာ..ဟုတ်လား အဖေ )(အေးကွ သားရ)( အဖေ ဖင်လိုးပေးတာ ကောင်းလားဟင် မိန်းမ)( အရမ်းမိုက်တယ် မောင်ရယ် ဆောက်ပါတ်အလိုးခံရတာနဲ့ မတူဘူး..အဖေက ဆရာကြီး မောင်ရဲ့..လုံးဝမနာဘူးသိလား ပီးတော့လေ ဖင်အလိုးခံရင်းနဲ့ ဆောက်ပါတ်ထဲက ပီးရတာ ဘာနဲ့မှ မတူဘူးမောင် ရေ..)( အဖေ..ဒါဆို အေးကို အခု ဖင်လိုးပြပါလား သားကြည့်ချင်တယ်)( သား…ရယ်မင်း တော်တော်ထန်ပါလားကွာ ဟီး)ချွေးမလေးကို ဖင်လိုးဖို့ ဖင်ဝကို ဂျယ်ရီသုတ်လိမ်းနေရင်း သမီးဖြစ်သူက( အဖေ..သမီး အပေါ်ကပဲတက်ဆောင့်ချင်တယ်..ဖေ့လီးကရှည်တော့ အပေါ်ကထက်ဆောင့် မှထိမ်းလို့ရတာ)( ဟုတ်ပါပီ ဗျာ..ကဲလာ)။ ကျုပ်ဟာ ဆိုဖာပေါ်မှာ ပေါင်ကားပီးထိုင်လိုက်ရင်းလီးကို ကော့တင်လိုက်ပါတယ်။( မောင်..ဖေ့လီးကို မိန်းမဖင်ပေါက်တေ့ပေးနော်..အဟင်း)ချွေးမလေးဖင်ပေါက်ထဲကို ကျုပ်လီးတဖြည်းဖြည်းဝင်သွားတာကို သားဟာ အနီးကပ်ကြည့်နေရင်း မိန်းမဖြစ်သူရဲ့ ဖင်တုန်ကြီးတွေကို လျာနဲ့ယက်လိုက်ပါတယ်။ဖင်ခံတဲ့အရသာကိုကြိုက်တဲ့ ကျုပ်ရဲ့ ချွေးမလေးကတော့ လီးတစ်ဆုံးဝင်တာနဲ့ အော်ငြီးနေပါပီ( ဟား..၀င်ပီ အဖေ့လီးဝင်ပီ..အားဟ..ကြပ်နေတာပဲ အဖေရယ်.)( မိန်းမ..အဖေ့လီး ၀င်တာခံလို့ကောင်းလား)။ချွေးမလေးဟာ သားရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေကိုစုပ်နမ်းလိုက်ရင်း( မောင်..ရယ်..အရမ်းကောင်းတာပဲ သိလား.မောင်သိအောင် အေးပြောမပြတတ်ဘူး တစ်ကိုယ်လုံးနေရာအနှံ့ကို အညောင်းတွေပြေပီး ကောင်းတာ..အာ..ပြောရင်းနဲ့ကို ကောင်းတာ မောင်ရေ..အအား..မိန်းမ ဆောက်စိကိုခြေပေးစမ်းပါမောင်ရယ် အား..အဖေရယ်ဆောက်ပါတ်ထဲကပါယားပီးကောင်းလာပီ..အီး.သမီးဆောင့်တော့မယ်နော်)။ဂျယ်ရီများများသုံးထားတာမို့ဖင်ထဲလီးဝင်တဲ့အသံတွေဟာတဗြွတ်ဗြွတ်..မြည်နေပါတော့တယ်။
” ကျွန်တော်နဲ့ ကြည်လေးဇာတ်လမ်း ” (ဖြစ်ရပ်မှန်) (စ/ဆုံး)
စိတ်ပါလာရင် ” ( စ/ဆုံး)